May Nyane: March 2008
ဆိုးဝှက်ကလေး Tag တဲ့ "ဇာတိမြေ"ပို့စ်ကို ရေးချိန်မှာ ကျမငယ်ငယ်က ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲမြို့မှာ နေဖူးတာ ထည့်ရေးပြီးသားပါ..။ အဲဒီကျောက်မဲမြို့အနားက ကျမ ချစ်တဲ့ နမ့်ဟူးတောင်းရွာကလေးအကြောင်း ၀တ္ထုတိုတပုဒ် ရေးခဲ့ဖူးတာလည်း ကြော်ငြာဝင်ထားခဲ့ပါတယ်။ ခုတော့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဒီတလော ကျမ စိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့ လေးလံနေတာမို့ စာလည်း အသစ်မရေးနိုင်တာနဲ့အတူတူ.... အဲဒီဝတ္ထုလေးပဲ တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
ခုတလောမှာတော့ သူက သူငယ်ငယ်ကနေခဲ့ဖူးသည့် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကျောက်မဲမြို့အနီးရှိ နမ့်ဟူးတောင်း ရွာကလေးကိုပဲ ပြေးသွားလိုက်ချင်စိတ်ဖြင့် မကြာခဏ လွမ်းဆွတ်သတိရနေတော့သည်။ ခုဆို အဲဒီရွာကလေးနဲ့ ခွဲခဲ့ရတာ အနှစ်နှစ်ဆယ်တောင်ရှိပြီပဲ။
အဲဒီတုန်းက၊ တကယ်တမ်း သူနေခဲ့ရတာက ကျောက်မဲမြို့ပေါ်မှာဖြစ်သည်။ သို့ပေမဲ့ သူကတော့ သူပျော်သည့် နမ့်ဟူးတောင်းမှာပဲ မကြာခဏ သွားနေခဲ့သည်။ ပြီးတော့၊ သူ့ဘ၀၌ ရှမ်းပြည်မှာ နေခဲ့ဖူးသော ကာလကို ပြန်တွေးမိလျှင်လည်း သူက နမ့်ဟူးတောင်းကိုပဲ စွဲမြင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
စင်စစ်... နမ့်ဟူးတောင်းကိုသာ သူသတိရသည်ဟုဆိုသော်လည်း သူ့ရင်ထဲမှာ တကယ်စွဲနေတာ က နမ့်ဟူးတောင်းရွာထဲရှိ သူနေခဲ့ဖူးသောအိမ်ကလေးရှိရာ ၀န်းကျင်တစ်ဝိုက်ကိုသာဖြစ်သည်။ ပြီးတော့၊ ခုချိန်ထိ သူရေးဆွဲခဲ့ဖူးသမျ ပန်းချီကားတွေထဲမှာလည်း အဲဒီ ပတ်ဝန်းကျင်မြင်ကွင်းကလေးကို ရေးဆွဲထားသည့် ပန်းချီကားများ အရေအတွက်တော်တော်များများ ရှိနေခဲ့သည်။ သည်နေရာမှာ၊ သူပြောချင်တာက အဲဒီ နမ့်ဟူးတောင်းကို သူ ဘယ်လောက် စွဲလန်းခဲ့သလဲ ဆိုတာ...။ ပြီးတော့... အဲဒီလို ဘာကြောင့် စွဲလန်းခဲ့သလဲ ဆိုတာကိုပဲ ဖြစ်သည်။
နမ့်ဟူးတောင်းကိုရောက်ခဲ့စဉ်က သူ အသက်ကိုးနှစ်လောက်ပဲ ရှိဦးမည်။ အံ့သြစရာ ကောင်း လောက်အောင် ပင် သူသည် ထိုအရွယ်ကလေးမှာပင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို အလွန် ခံစားတတ်ခဲ့သည်။ အဲဒီ နမ့်ဟူးတောင်းကို တွေ့တွေ့ချင်း သူ အပြည့်အ၀ ခံစားလိုက်ရသည်က ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင် သွားရခြင်းဖြစ်သည်ကို သူ ခုထိတိုင် နွေးနွေးထွေးထွေး ခံစားနေရဆဲဖြစ်သည်။
အဲဒီတုန်းက “ဒါ...နမ့်ဟူးတောင်းပဲ”ဟု သူ့ကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်သူကတော့ အဖေပဲဖြစ်သည်။ သို့ပေမဲ့ အဲဒီတုန်းက သူ၏လှိုက်လှဲသာယာသွားမှုကို အဖေပင် သိချင်မှ သိပေလိမ့်မည်။ သူကတော့ မြင်လိုက်ရသော မြင်ကွင်းကို သိပ်ချစ်မက်သွားကာ မျက်ရည်များပင် စို့လာခဲ့သည်။ သူခံစားလိုက်ရသည်က... စိန်ခြယ်ပန်းတွေ ရွှေဒင်္ဂါးပန်းတွေ.. သရက်ထည်ပန်းတွေ.. နှင်းဆီပန်းတွေ.. ၀ိုင်းရံပြန့်ကျဲနေသည့် ဥယျာဉ်ခြံအလယ်မှာ ရှိနေသော မြေစိုက်အိမ်ကလေးနှင့် အဲဒီအိမ်ကလေး၏ နောက်ခံတောင်တန်းပြာတွေက သက်ဝင်ပန်းချီကား တစ်ချပ်လို သူ့ကို ဆီးကြိုပွေ့ပိုက်လိုက်ခြင်းကိုပဲ ဖြစ်သည်။
သူသည် ရုတ်တရက် ၀မ်းသာားအားရနိုင်လှစွာ ကားပေါ်မှ ခုန်ဆင်းပြီး ရှေ့တူရှူဆီ ချက်ချင်း ပြေးမိတော့သည်။ ကြည့်ပါဦး....ပန်းခင်းတွေ၊ ပြီးတော့...ပန်းခင်းပေါ်က လိပ်ပြာတွေ ပုစဉ်းတွေ၊ ပြီးတော့ နှင်းမှုန်တွေ၊ ဘယ်လောက်အေးချမ်းလိုက်သလဲ.. သာယာလိုက်သလဲ.. ဘယ်လောက်များ ချစ်စရာကောင်းလိုက်သလဲ...။ သူသည် အသက်နှင့်မမျှအောင်ပင် ထိုဝန်းကျင်ထဲမှာ ပျော်ဝင်သွားခဲ့တာကိုလည်း ခုထိ ပြန်ခံစားလို့ရဆဲ ဖြစ်သည်။ နောက်တော့ သူသည် သူချစ်သည့် ပန်းတွေထဲမှာ လျှောက်ပြေးနေတော့သည်။ သရက်ထည် ရောင်စုံတွေ... အာဖရိကန်ဒေစီတွေ... အမေရိကန်နှင်းဆီတွေ...၊ သစ္စာပန်းတွေဆီမှာ သူ့ဘ၀ကို နှစ်ပစ်လိုက် တော့သည်။ သူ့ဘ၀မှာ စိတ်အချမ်းမြေ့ဆုံး... အပျော်ဆုံးအချိန်ပဲ။
နောက်တော့၊ ပန်းခင်းတွေရဲ့အဆုံးမှုာ တောင်ကုန်းပြေပြေလေး တွေ့သည်။ တောင်ကုန်းပေါ်မှာ လှေခါးထစ်ပုံစံ စိုက်ခင်းတွေ၊ အဲဒီမှာ ပန်းဂေါ်ဖီပွင့်တွေ၊ ဆလတ်တွေ၊ ခရမ်းချဉ်တွေ၊ ချဉ်ပေါင်တွေ၊ ငရုတ်ပင်တွေ... စိမ်းစိုလို့။ တဘက်က တောင်ကုန်းတွေပေါ်မှာတော့ စိန်ပန်းပြာပင်ပုပုတွေက ခရမ်းပြာပွင့်တွေ ဝေလို့။ အပင်ရဲ့ အောက်ခြေက မြက်ပွင့်ဝါ၀ါတွေကတောင် လှလို့။ ပန်းတွေကို တွေ့လျှင် သူကတော့ အရူးအမူး။ တောင်ကုန်းမို့မို့ ပေါ်ကို သူပြေးတက်မိသွားပြန်သည်။ ပြီးတော့၊ “ပျော်လိုက်တာ”ဟု အော်ဟစ်ပစ်လိုက်မိတော့ ကြည်နူး ပျော်ရွှင်စရာကောင်းလှစွာပင် သူ့အသံက ပဲ့တင်ရိုက်ကာ သူ့ဆီ ပြန်ပြေးလာ၏။ အဲဒီမှုာ သူပိုပျော်ကာ ပို၍ပင် “ပျော်တယ်”ဟု ကျယ်ကျယ် လောင်လောင် အော်ဟစ်ပစ်လိုက်တော့၏။ အခါပေါင်းများစွာ...။
ပြီးတော့၊ မြက်ခင်းပေါ်လှဲအိပ်ကာ မိုးကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်တော့ နှင်းမှုန်တို့ပိတ်သော ကောင်းကင်၏ အလင်းက သူ့ကို မျက်စိမကျိန်းစေခဲ့။ သင့်တင့်သောအလင်းမှာ နှင်းမှုန်တွေ ထုထည်လိုက် ရွေ့လျား သွားတာကိုပင် သူမြင်နေရ၏။ ပြီးတော့ မျက်စိအေးစရာ... ကြည့်စမ်းပါဦး... သူမြင်ခဲ့ရသည့် ကောင်းကင် အပြာနှင့် စိန်ပန်းပြာ၊ ပြီးတော့ တောင်တန်းရဲ့အပြာ... အပြာတွေ၊ ပြီးတော့၊ သူ ကိုယ်တိုင် ခံစားခဲ့ရသည့် အေးချမ်းခြင်းအပြာ၊ မြက်ခင်းတို့သည်ပင် အစိမ်းထက် အေးချမ်းသော အပြာနှင့်ရောသည့် စိမ်းပြာ၊ သိပ်သိပ်သည်းသည်း ပန်းခင်းတို့သည်လည်း အရောင်အားလုံး ရောထွေးခြင်းဖြင့် ပြာမှိုင်းနေမည်။
နောက်တော့၊ ငှက်တွေကလည်း အပြာသန်းနေ၏။ အားလုံးဟာ အေးချမ်းလို့၊ ငြိမ်သက်လို့။ ဒါတွေကို ခုပြန်တွေးကြည့်တော့ ခုပင် ပန်းချီရေးချင်လာသည်။ ဘယ်လောက် ရေးရ ရေးရ မရိုးနိုင်သော ပန်းချီကားပေါ့။ ပြီးလျှင်တော့ “အပြာသက်ငြိမ်”လို့အမည်ပေးချင်သည်။
အဲဒီလို လှဲအိပ်နေဆဲပင် ပတ်ဝန်းကျင်က ငြိမ်သက်သွားခဲ့သည်။ ခုပြန်တွေးကြည့်မိမှ အဲဒီ ငြိမ်သက်သွားမှုက ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ငြိမ်သက်မှုထက် သူ့စိတ်နှလုံးအထဲမှ ငြိမ်သက် အေးစိမ့်သွားခြင်းပဲဖြစ်မည်ဟု ထင်လာသေး သည်။ အဲဒီလို ငြိမ်သက်နေဆဲ၌ပင် သူ့အာရုံမှာ ရေစီးသံသဲ့သဲ့ ကြားလာသည် ထင်၏။
အို... သူ့အာရုံကြောတွေ ရှိန်းမြလာပြီ။ သူ အာရုံစိုက်သထက်စိုက်လိုက်တော့ ရေပလုံစီသံတွေပင် ကြားလာ ပြန်၏။ သူသည် လှဲနေရာမှ အသာထလိုက်သည်။ ပြီးတော့၊ သစ်ရွက်တစ်ရွက် လေမှာလွင့်သော ပေါ့ပါးမှုမျိုးဖြင့် အဲဒီ ရေသံရှိရာ သူရွေ့လာခဲ့သည်။ ကြည့်စမ်းပါဦး... အံ့သြဖို့ကောင်းလိုက်တာ၊ သူ့အာရုံတွေဟာ အဲဒီလောက် ပါးနပ်လိမ့်မည်ဟု သူဘယ်တုန်းကမှ မထင်ခဲ့ဖူးချေ။ သူနှင့်ခြေလှမ်း အလှမ်းနှစ်ဆယ်စာလောက်ရှိ တောင်ကုန်း၏ အောက်ခြေမှာ တွေ့လိုက်ရသော စမ်းချောင်းကလေးက သူ့အာရုံတွေ၏ ပါးနပ်ခြင်းကို အတည်ပြုပေးလိုက်၏။
သူသည် အညှို့ခံနေရသူလို စမ်းချောင်းကလေးဆီ ရောက်သွား၏။ တောင်ကုန်းကလေးကို ရစ်ခွေပြီး စီးနေသော စမ်းချောင်းကလေး...၊ အဲဒီစမ်းကလေးကို မျှော်ကြည့်လိုက်တော့ ခပ်ဝေးဝေးကတောင်တွေကြားမှာ ကွေ့ဝိုက်ရင်း ပျောက်ကွယ်သွား၏။ ကြည်လင်စွာဖြင့် ညင်ညင်သာသာ စီးဆင်းနေသော စမ်းကလေး။ စမ်းကလေးဘေးမှာထိုင်ပြီး စမ်းရေထဲ ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ ကျောက်စရစ်ရောင်စုံတို့နှင့် ပျော်မြူးနေသော ရွှေငါးတွေ...၊ ပန်းရောင်စုံ တို့ကဲ့သို့ နုနွဲ့သော၊ လန်းဆန်းသော၊ အရောင်တို့ဆန်းပြားသေားငါးကလေးတွေ...၊ စမ်းချောင်း ကလေးထဲ ဆင်းကြည့်တော့ ရာသီဥတုနှင့် ရေမြေ၏ သဘာဝအအေးထဲမှာ ဆန်းပြားလှစွာ စမ်းရေကတော့ နွေးနေခဲ့၏။ သူ့ခြေဖ၀ါးကို ငါးကလေးတွေ တိုးလို့...၊ သူ့လက်နှင့်အုပ်ဖမ်းတော့ ငါးကလေးတွေ၏ စိုနွေးနွေးကိုယ်လုံးကလေးတွေက ချစ်ခင်ရင်းနှီးဖွယ်..။
တကယ်တော့၊ အဲဒီ မြင်ကွင်းအားလုံးကို အနှစ် နှစ်ဆယ်လုံးလုံး သူပန်းချီကားများစွာ ဖန်တီးခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ အဲဒီတုန်းက အပျော်သည် ခုထိတိုင် နောက်ထပ်တခါမှ မရဖူးတော့သော အပျော်လည်းဖြစ်ပြီး သူ့အတွက် အိပ်မက်လဲဆန်လှသည်။ တကယ်တော့၊ နမ့်ဟူးတောင်းက သူ့အတွက် ကောင်းကင်ဘုံကလေး တစ်ခုလိုပဲဖြစ်သည်။ အဲဒီ ကောင်းကင်ဘုံထဲမှာ ဘယ်လိုဝေဒနာမျိုးမှ ရှိမနေခဲ့ပေ။ ပြီးတော့ ခုထိတိုင် တန်ဖိုးရှိဆဲ...။ အဲဒီပန်းခင်းတွေထဲက မြေစိုက်အိမ်ကလေးထဲမှာတော့ အဖေ့မိတ်ဆွေ သိပ်ချစ်စရာ ကောင်းသည့် ရှမ်းမိသားစုရှိ၏။ နောက်တော့ သူ့ကိုဆွဲဆောင်လှသည့် နူးညံ့ပျော့ပြောင်းသော ရှမ်းထမင်းနှင့် အိမ်ဖြစ် တို့ဟူးကြော်တွေ၊ ဂေါ်ဖီပန်းပွင့်၊ ဆလတ်နှင့်ခရမ်းချဉ်တို့ကို ငရုတ်စိမ်းနိုင်နိုင်ဖြင့် အစိမ်းသုတ် ထားသော ဟင်းရံတွေ၊ ရှမ်းခေါက်ဆွဲနှင့် တို့ဟူးနွေးတွေ၊ လတ်ဆတ်သော ဂျူးမြစ်ချိုချိုတွေ စားရတာလည်း သူသတိရသည်။ အဲဒီထမင်းဝိုင်းမှာ ရိုးသားလှသော ရှမ်းမိသားစုနှင့်အတူ ထမင်း မြိန်မြိန်စားရသည်ကိုလည်း သူပန်းချီရေးဖူးသေး၏။ ပြီးတော့ “သုခဘုံမှ နံနက်စာ”ဟု အမည်ပေးခဲ့သည်။
ပြန်တွေးလျှင်တော့ သူက အဲဒီနမ့်ဟူးတောင်းက လေပြေ၏ရနံ့ကိုပင် ချက်ချင်း ခံစားလာရသေး၏။ ထင်းရူးနံ့ များသော်လည်း စိမ်းစိုသည့်ရနံ့တမျိုး ပိုကဲသောလေပြေ၊ ခုထိတိုင် ပြန်ရှာမတွေ့နိုင်သော ရနံ့၊ ဘ၀မှာ မကြာခဏ တမ်းမက်ရသော ရနံ့လည်း ဖြစ်သည်။
နောက်ပိုင်းမှာတော့... အလွန်ခံစားလွယ်သလောက် ခံစားတတ်လွန်းစွာသော သူသည် မြို့ပြ၏ ဖိစီးမှုထဲမှာ တကယ့်ဝေဒနာသည်ဖြစ် လာတော့သည်။ အနုပညာသည်ဆိုတာ ခံစားလွယ်ရတယ်... ခံစားမှုအား ကောင်းရ တယ်ဟု ယုံကြည်သောအခါ သူသည် ရောင့်ရဲနိုင်မှုဆိုတာနှင့်ပင် ဝေးလာခဲ့သည်။ တကယ်တော့၊ သူက အနုပညာသမားစစ်စစ်ဆိုတာ ရောင့်ရဲပီတိဖြင့် လောကကို အချစ်နှင့်သာ မြင်တတ်သည်ဆိုသော အချက်ကို တော့ မေ့ထားတတ်သူသာ ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ... သူ့ဘ၀မှာ စိုင်းခမ်းလိတ်၏ “ပျောက်ဆုံးနေသောနိဗ္ဗာန်ဘုံ”ကို မကြာခဏ အော် အော်ဆိုရသော ရက်တွေ များလာတော့သည်။
မြို့ပြရဲ့ရက်တွေထဲမှာ သူသိသည်က ခြိုးခြံရခြင်းတွေ၊ သည်းခံရခြင်းတွေ၊ မျိုသိပ်ရခြင်းတွေသာ ဖြစ်သည်။ သူသည် ဘစ်ကားကျပ်သည်ကိုပင် ငိုချင်တတ်သူဖြစ်ရာ အရသာငတ်သည့် အခါ မှာကား ဘ၀ဆိုတာ ဒုက္ခဘုံပဲဟုသာ ညည်းတွားမိတော့သည်။ သူက အရသာမက်သူပေကိုး။ သူက အစားအသောက် မက်၊ အနုပညာ၌ စွဲမက်သူပီပီ စိတ်ငြိမ်းချမ်းသာကိုလည်း မက်၏။ တကယ်တော့ သူက အတ္တကြီးသူသာ ဖြစ်သည်။ ထိုအခါမှာတော့ သူက အနုပညာသမားဆိုတာ အတ္တကြီးတယ် ဟုပင် သူ့ဘာသာ ကြွေးကြော်မိသေး၏။
သူ့မှာ လိုချင်ခြင်းတွေလည်း များလှစွာသည်။ လူပီသစွာပင် အရောင်အသွေးစုံအ၀တ်အထည် အလှအပတွေ လိုချင်...၊ ကျောက်မျက် စိန်ရွှေတွေ လိုချင်...၊ နောက်ဆုံးပေါ်ကား စီးချင်...၊ အစားကောင်းတွေ စားချင်...၊ သို့ပေမဲ့ ထိုအရာတွေ သူနှင့်အလှမ်းဝေးလှသည်ကို သူသိသည်။ သူသည် အိပ်မက်တွေထဲမှာပင် ထွက်-ထွက်ပြေးချင်လာ၏။ အဲဒီတလောမှာတော့ သူမက်သော အိပ်မက်တွေက တပုံစံတည်းဖြစ်သည်။ သူက အိပ်မက်တွေထဲမှာ အမောတကောပြေးကာ တောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ် တက်နေသတဲ့။ တက်လို့ပဲမဆုံးတော့။ သူ မောသထက်မောကာ.. လန့်နိုးတော့၊ ဘ၀၏ လိုချင်ခြင်းအမောထဲမှာ သူက လက်ပန်းကျနေခဲ့ပြီ။
နောက်တော့ ဘ၀ထဲမှာ မှန်းသမျှ မရနိုင်တော့တာကို သူ သိသထက် သိလာသောအခါမှာတော့ သူက သူဘ၀အတွက် လုံလောက်သမျှ အတိုင်းအတာကလေးကိုသာ တောင့်တတော့သည်။ သူက ရောင့်ရဲစွာ အရာရာခြိုးခြံနေနိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်တော့၏။ အဲဒီအခါမှာ သူမက်သော အိပ်မက်တို့က အိပ်ပျော်နေရင်းမှာပင် သူ့အပေါ် ကမ္ဘာကြီးပြိုကျလာပြီး သူအသက်ရှူကျပ်ကာ လန့်နိုးရသော အိပ်မက်တို့သာဖြစ်ပြီး၊ လန့်အနိုးမှာတော့ သူတကယ်ပဲ အသက်ရှူ ကျပ်လာ တော့သည်။
အဲဒီရက်တွေမှုာတော့ နမ့်ဟူးတောင်းက လူတွေရဲ့မျက်နှာတွေကို သူ ပြန်သတိရလာသည်။ အင်မတန် ကြည်လင်အေးချမ်းသော မျက်နှာများ၊ သူတို့တွေသည် တီဗွီမမက်၊ မော်တော်ကား မမက်၊ ဂြိုလ်တု အသံဖမ်းစက် မမက်၊ ကြေးအိုး မမက်၊ ဒန်ပေါက် မမက်၊ ကြက်သား ၃၂၀-ဈေး မမက်၊ ၀က်သား၂၈၀-ဈေး မမက်၊ အကောင်းဆုံးကတော့ ငွေစက္ကူတို့၏တန်ဖိုးကိုပင် မမက်။ အဲဒီနေရာမှာ ဘာကိုမက်ရမှန်းမသိစွာ၊ သူတို့တတွေက ခင်မင်လို့ရောက်လာသူတို့ကို လှိုက်လှဲ နွေးထွေး ကြိုလို့၊ ဧည့်ဝတ် ကျေပြွန်ဖို့ကိုသာ မက်သောနေရာ...၊ ထိုပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ လူသား၏ ပကတိတန်ဖိုးကိုပင် သူ တွေ့နိုင်လိမ့်မည်ဟု ထင်လာသည်။
သူရပ်တည်နေရသော မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်ကလေးထဲမှာတော့ သူ့အတွက် လူတစ်ယောက်၏အခန်း ကဏ္ဍနှင့် ဘ၀၏တန်ဖိုးဆိုတာက ကျဆင်းလာသည်ဟု ထင်လာခဲ့ပြီ။ စားစရိတ်၊ နေစရိတ်၊ မိသားစုစရိတ်တွေက သူ့ကို ဖိစီးသထက် ဖိစီးလာပြီ။ သူ ပန်းချီတွေပင် ဖြောင့်ဖြောင့် မရေးနိုင် တော့။ ဘ၀ရဲ့ရှင်သန်ခြင်းအတွက် အဓိကလိုအပ်ချက်ဟာဘာလဲ ဟု သူ မကြာခဏ တွေးတတ် လာခဲ့ပြီ။ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ခြောက်သွေ့သော အရောင်တွေ များလာသည် ထင်၏။ လူတွေရဲ့ မျက်လုံးတွေ၊ အသားအရေတွေ၊ ပါးစပ်တွေ၊ လက်ချောင်းတွေ၊ ခြောက်သွေ့အက်ကွဲ...။ သစ်ပင်ပန်းမာလ်တွေ ခြောက်သွေ့အက်ကွဲ၊ သူကိုယ်တိုင် အလဲအကွဲ။
ထိုတလောမှာတော့ သူမက်သောအိပ်မက်တို့က စာမေးပွဲဖြေကာနီးမှ ကားမမီလိုက်တာတို့... နာရီမှားနေတာ တို့... လမ်းမှား သွားတာတို့...အခန်းပျောက်နေတာတို့ ဖြစ်နေတော့သည်။
ခုချိန်မှာ စိမ်းစိုအေးချမ်းကာ ငြိမ်သက်ကြည်လင်သော ပကတိပြည့်စုံသည့် ပန်းခင်းပြင်ကျယ်ထဲမှာ လျှောက်ပြေးလိုက်ရရင်တော့ဖြင့် သိပ်ကို ပေါ့ပါးပျော်ရွှင်သွားရလိမ့်မည်ဟု သူယုံကြည်သည်။ ပြီးတော့၊ စမ်းရေစီးသံကို နားထောင်ရင်း သာယာခြင်းထဲမှာ သူ့ကိုယ်သူ နှစ်စိမ်မည်။ မြက်ခင်းပေါ် လှဲအိပ်ရင်း ကောင်းကင်ပေါ်မော့ကြည့်ကာ စိတ်အေးစေမည့်အပြာ၏ အေးမြခြင်းထဲမှာ သူ့ရဲ့ပျောက်ဆုံးသွားသော ကောင်းကင်ဘုံကို မြင်ယောင်ခံစားမည်။ အဲဒီအရာအားလုံးနှင့် ပြည့်စုံလျှင်တော့ သူက လေ၌လွင့်မြောသူလို ကိုယ့်စိတ်ကိုဖော့ထားပြီး တောင်တန်းတွေနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ကာ အားရပါးရဟစ်အော်ရယ်ရင်း “ပျော်တယ်”ဟု အသံကုန်ဟစ်ကြွေးမည်။ အဲဒီအခါမှာ တောင်တန်းတွေဆီက ပြန်လာမည့် ပဲ့တင်သံထဲမှာ ယုံစားကာ တလောကလုံး အပျော်နှင့်သာ လွှမ်းတော့သည်ဟု သူယုံလိုက်နိုိင်တော့မှာ သေချာလှသည်။ ထိုအခါ... တခါတရံမှာတော့ လှည့်ဖျားခံရခြင်းက ဘ၀ကို သာယာပျော်ရွှင်စေသည်ဟုပင် သူက ယူဆမိ တော့သည်။
သို့ပေမဲ့၊ အဲဒီ လိုအပ်ခြင်းဆိုတာတွေနှင့်ကင်းသော...၊ လိုချင်စရာ ပကာသနတို့မရှိသော...၊ အတုအယောင် တို့နှင့် ဝေးသော...၊ ရှားပါးခြင်းဆိုတာကို မကြားရသော...၊ ရောင့်ရဲပြီးသားပီတိနှင့် အလိုပြည့်သော...၊ အဲဒီ ရွာကလေးကို တကယ်ရောက်အောင် သွားဖို့ဆိုတာမှာတော့ သူက သူကိုယ်တိုင် အသားတကျ ဖက်တွယ် ထားခဲ့ပြီးဖြစ်နေသော မြို့ပြ၀တ်ရုံများကို ခွာချပစ်လိုက်နိုင်ဖို့ အတွက် အတော်ကြိုးစား ရဦးမှာဖြစ်သည်။
လူဆိုတာမျိုးက ရနိုင်ခဲလေ တပ်မက်လေ...တဲ့။ ထိုအခါ... တကယ်တမ်း စွန့်ခွာရခက်သော မြို့ပြ၀တ်ရုံများ ကြောင့်ပင် ရရန်ခက်နေသည့် “နမ့်ဟူးတောင်းရွာကလေးဆီသွားနိုင်ခွင့်”ကို သူပို၍ တပ်မက် စွဲလန်းတော့ သည်။
သို့နှင့်ပင်..... ခုတလောမှာတော့ သူက နမ့်ဟူးတောင်းရွာကလေးဆီသို့ သတိရ လွမ်းဆွတ်ခြင်းများနှင့်အတူ အတွေးတွေထဲမှာ ပြေးပြေးသွားခြင်းဖြင့်သာ သူ့ကိုယ်သူ လှည့်ဖျားနေရတော့သည်။
at March 31, 2008 8 comments:
သွေးမရှိသည့်နှယ် ဖြူသောအသားအရည်၊ မနိမ့်မမြင့်အရပ်နှင့် နီထွေးသော နှုတ်ခမ်းပါး တို့သည် ချစ်သူ၏ အသွင်အပြင်များ ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ့်အနေနှင့်ဆိုလျှင်မူ ချစ်သူ၏ စူးရှသည်နှင့်အမျှ သိမ်မွေ့တည်ငြိမ်သော ထိုမျက်လုံးအစုံတို့ကို ပိုမိုထည်ဝါစေသော မျက်မှန်တစ်လက်နှင့် ပိန်လျသည်နှင့်အမျှ ချည့်နဲ့ဟန်အပြည့်ရှိသော လက်အစုံတို့ကိုသာ ပိုမိုစွဲမက်သည်ဟု ဆိုချင်ပါသည်။
တည်ငြိမ်ထည်ဝါသည့်မျက်ဝန်းအစုံက ကိုယ့်အပေါ်တွယ်တာမှုကိုပြပြီး ချည့်နဲ့ဟန်အပြည့်ရှိသော လက်အစုံက ကိုယ့်လက်ဖ၀ါးကို ဆုပ်ကိုင်ကာ အားအင်အပြည့် ရရှိစေသောကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။ ကိုယ့်ချစ်သူတွင် မိန်းမလှလေးများမက်မောလေ့ရှိသည့် အရှိန်အ၀ါများ မရှိလှပါ။ သို့သော် မိန်းမကောင်းများ မက်မောတတ် သည့် အရည်အသွေး များကိုမူ ချစ်သူ ပိုင်ဆိုင်ထားပါသည်။ စိတ်ဖြူသောချစ်သူသည် ရိုးသားသည်နှင့်အမျှ ပတ်ဝန်းကျင်၏ လှည့်စားမှုကို နားမလည်တတ်သူ၊ မခံယူနိုင်သူလည်း ဖြစ်ပါသည်။
ချစ်သူသည် ဦးနှောက်ကောင်းကောင်းတစ်စုံကို ပိုင်ဆိုင်သည်။ ရိုးသားသော မျက်လုံး အစုံက ပတ်ဝန်းကျင်၏ ရုပ်ဒြပ်အလှကို ကြည့်မြင်နိုင်သည်။ နှုတ်ခမ်းပါးပါးက အမှန်တရားကိုသာ ပြောတတ်သည်။ (ထို့ကြောင့် လောကနှင့် အဆင်မပြေ)။ ချည့်နဲ့နဲ့လက်တစုံက အနုပညာများစွာကို ဖန်တီးသည်။ (သီချင်းရေး၊ ကဗျာရေး၊ ပန်းချီဆွဲသည်)။ သန်မာသော ခြေအစုံက ဦးတည်ရာကိုတည့်မတ်စွာ လှမ်းကာ ခန္ဓာကိုယ်ကို ခိုင်မာအောင် ပံ့ပိုးသည်။
စိတ်ဓါတ်မာကျောသည်နှင့်အမျှ စိတ်ထားသိမ်မွေ့သည့် ချစ်သူသည် လောက၀န်းကျင်အတွင်းတွင် ၀င့်ကြွား လောက်ဖွယ်ဟူ၍ မိန်းမပျိုတို့ရင်ခုန်နိုင်ဖွယ် မျက်နှာအသွင်အပြင်နှင့် ဆံနွယ်ခွေလေးများ ရှိသည်။ ထို့အပြင် သ၀န်တိုတတ်သော ချစ်သူတစ်ယောက်လည်း ရှိသည်။ ထိုချစ်သူကတော့ ကိုယ်ပဲ ဖြစ်ပါသည်။
အနုပညာအလှအပများစွာ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းသည့် ချစ်သူတွင် မလှမပသော ချစ်သူများစွာရှိနေသည်မှာ ထူးဆန်း သယောင် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကိုယ်သည် ချစ်သူကို အလွန်တရာ ချစ်ကြောင်း သိနိုင်လျှင်မူ ကိုယ်နှင့်ချစ်သူ တို့၏ နှစ်ယောက်တွဲဘ၀က ထူးဆန်းတော့မည်မဟုတ်ပါ။
ကိုယ် ချစ်သူကို သိပ်ချစ်ပါသည်။ ဖြူစင်သောချစ်သူကို ကလေးငယ်သဖွယ်လည်း သံယောဇဉ် ကြီးရပါသည်။ အင်အားမျှဝေပေးသူဖြစ်၍လည်း အားကိုးတွယ်တာရပါသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် ချစ်သူနှင့်ကိုယ်သည် အဆင်မပြေ လှသည့်ကြားမှပင် တည်မြဲနေကြ ရပါသည်။
ချစ်သူသည် မပြည့်မစုံသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ စိတ်အင်အားချို့တဲ့ကာ ဘ၀ကို တစောင်းတိုက် ဖြတ်နေရသူလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ချစ်သူ၏ဘ၀သည် ကျဉ်းကျဉ်းလေး ဖြစ်သည်။ ချစ်သူ၏ဘ၀လေးထဲတွင် သားသမီးကို စည်းစနစ်ကြီးလွန်းစွာ အုပ်ချုပ်သော (ချုပ်ချယ်လှစွာသော) အဖေနှင့် သားကို အလွန်ချစ်သည်နှင့်အမျှ လင်ယောက်ျားကို အလွန်ရိုးကျိုးသော အမေတို့ ရှိနေပါသည်။ (ချစ်သူဘ၀တွင် ညီနှင့် ညီမလေးက အရေးမပါလှပါ)။
ဖခင်ထံမှ နည်းစံနစ်မမှန်သော မိဘမေတ္တာပေးအပ်မှုနှင့် လင်ယောက်ျားနှင့် သားအကြား ဗျာများရတတ်သည့် မိခင်မေတ္တာ အကြားတွင် ချစ်သူလူလားမြောက်ခဲ့ရပါသည်။ ချစ်သူ၏ ငယ်ဘ၀သည် ကျန်းမာရေးချို့တဲ့မှု၊ အပြင်းအထန် စာကြိုးစားရကာ အိမ်တွင်းအောင်း နေရမှုနှင့် လူငယ်ဘ၀ ပျော်ရွှင်လွတ်လပ်ခြင်းဟူသည်ကို မသိရမှုတို့နှင့်အတူ စိတ်ပျက် ငြီးငွေ့ဖွယ် ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ရပါသည်။
ပညာသင်အဆင့် အတန်အသင့် မြင့်လာကာ အတန်လွတ်လပ်စွာ ပျော်ရွှင်ရသော တက္ကသိုလ် ပညာသင်နှစ် များသို့ ရောက်လာသောအခါတွင်ကား ချစ်သူသည် မည်သည့် လူငယ်များနှင့်မှ မတူလှစွာ အလွန် ပျော်ပါးခဲ့သည်။ လှောင်အိမ်အတွင်းမှလွတ်လာသော ငှက်သို့ပင် ဖြစ်သည်။
သို့သော် ချစ်သူ၏ရင်တွင်း၌မူကား ငယ်စဉ်ဘ၀ဒဏ်ရာများစွာက နေရာယူခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ငယ်စဉ် ကလေးဘ၀ က ကစားရမည့် အရွယ်တွင် စာအုပ်များနှင့် ကျင်လည်ခဲ့ရသော ချစ်သူသည် ပတ်ဝန်းကျင်သဘောကို နားမလည်နိုင်သည့် စိတ်သဘောနှင့် အရာရာကို သိနိုင်စွမ်းသော ဆင်ခြင်ဥာဏ်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ကာ အဆင်မပြေဖွယ် ဘ၀အတွင်း၌ ဘာသာ ပျော်မွေ့နေရရှာပါသည်။ ချစ်သူသည် လွတ်မြောက်ခြင်းနှင့် လွတ်လပ်ခြင်းတို့ကို ခွဲခြား မသိစွာ ပျော်နေရှာသူလည်း ဖြစ်ပါသည်။
တဘက်စွန်းရောက်သော မိဘမေတ္တာ၏ ချစ်ခြင်းသည် သားသမီး၏စိတ်အင်အားဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် စိတ်ဓါတ်လုံခြုံမှုကို ထိပါးစေနိုင်ကြောင်း ချစ်သူ၏ ပညာတတ်မိဘများက မသိကြပါ။ သားဖြစ်သူကို စည်းဘောင်များစွာအတွင်း တင်းကျပ်စွာ ထိန်းသိမ်းပျိုးထောင်ခြင်းကြောင့် ရင်သွေးတွင် စိတ်အင်အားချို့တဲ့မှု၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မယုံကြည်မှု နှင့် အတွေးအခေါ် မညီမျမှုများဖြစ်တတ်ပါသည်။ ဒါကိုလည်း ဒက်ဒီနှင့် မာမီ (ချစ်သူက အဲသည်လို ခေါ်ပါ သည်) မသိကြပါ။
စာအဖတ်များမှုကြောင့် ဆင်ခြင်နားလည်နိုင်စွမ်း ထက်မြက်လှသော ချစ်သူသည်၊ တချိန်တည်းတွင်ပင် မသိစိတ်၏ သိမ်ငယ်မှု၊ စိတ်ဓါတ်နိမ့်ကျမှုတို့ကို အားဖြည့် မွမ်းမံပေးဖို့ရာ ကိုယ်သည် ချစ်သူ၏နံဘေးတွင် အဖော် ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။
ချစ်သူက ကိုယ့်ကို အလွန် တွယ်တာပါသည်။ ချစ်သူ၏ လိုအပ်သရွေ့သော လပ်ဟာမှုများစွာကို ကိုယ်ကသာ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်ဟု ကိုယ်နှင့်အတူ ချစ်သူကလည်း ယုံကြည်စွာ လက်ခံထားပါသည်။ ကိုယ်သည်လည်း တဘက်စွန်းရောက်တတ်သော ချစ်သူ၏ ချစ်ခြင်း၊ မချစ်ခြင်းများကြားတွင် စိတ်ညစ်တခါ၊ ၀မ်းသာကြည်နူး တလှည့်ဖြင့် ကျေနပ်စွာ ရှိနေခဲ့ပါသည်။
တခါတခါ ချစ်သူသည် အတွေးလွဲကာ အသည်းကြောင်တတ်ပြန်ပါသည်။ ၀န်းကျင်နှင့် လိုက်လျော ညီထွေမှုမရှိ၍ စိတ်အခန့်မသင့်ရသည့်အခါ ချစ်သူသည် အတိုက်အခိုက်များအတွင်းတွင် တုန်လှုပ်တတ် ပြန်သည်။ ထိုအခါ ကိုယ်၏ မလှမပခြင်းနှင့် ချစ်သူ၏မပြည့်စုံမှု၊ ကိုယ်၏ပြည့်စုံမှုနှင့် ချစ်သူ၏ အလိုမကျမှုတို့က အစဉ်အမြဲ ပဋိပက္ခအဖြစ် ကြုံကြရပါသည်။ ထိုအခါ... “မောင်ရယ် စိတ်ကိုဖော့ထားပါ... လူပြောမသန်.. လူသန်မပြော.. ဆိုတဲ့ အတိုင်းပဲ သဘောထားလိုက်ပါနော်” ဟု ချစ်သူ့စိတ်ကို ပြေလျော့စေရပါသည်။ ထို့အပြင်... “မောင့်ကို ကိုယ်သိပ်ချစ်တယ်”ဟူသော စကားကို ဂါထာရွတ်သကဲ့သို့ ကိုယ်ရွတ်သည့် အခါတွင်လည်း မောင်က စိတ်တုန်လှုပ်မှုတို့ လွင့်ပါးကာ ကြည်လင်လာပြန်ပါသည်။ ချစ်သူ၏ ငယ်ဘ၀ အငုံ့စိတ်များ ရိုက်ခတ်လာသည့်အခါတွင်လည်း ချစ်သူသည် ကိုယ့်အား သူစိမ်းသဖွယ်ကြည့်ကာ “ကျနော် ခင်ဗျားကို ချစ်သူမတော် ချင်တော့ဘူး... တယောက်တည်းပဲ အေးအေးနေချင်တယ်”ဟု ဆိုတတ် ပါသေးသည်။ ထိုစကားသည် ပင်ကိုယ်စိတ် ခက်ထန်မာကြောသော ကိုယ့်အတွက် စိတ်ပျက်ဖွယ် ဖြစ်သော် လည်း ချစ်သူကိုသိသော ကိုယ်သည် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ပြုံးကာ “မောင်မချစ်လည်း ကိုယ်ကတော့ ချစ်မှာပဲ” ဟု မောင့်လည်ကို ခိုဖက်ကာ မောင့်ရင်တွင်းသို့ တိုးဝင်မှီခိုကာ ပြန်ပြောဖြစ်သည်။ ထိုအခါ မောင်သည် အပြစ်ကင်းစင်စွာပြုံးကာ ကိုယ့်လက်ဖ၀ါးကို ဆုပ်ဖျစ်တတ်ပါသည်။
သို့နှင့်ပင် ချစ်သူနှင့်ကိုယ်သည် ခဏခဏ နှုတ်ဆက်လျက်က တစ်လက်မမျှပင် အဝေး မခံနိုင်ကြသော ချစ်သူစစ်များအဖြစ် ပို၍ ပီပြင်လာခဲ့ပါသည်။
ချစ်သူ၏ ဦးနှောက်တွင် တဘက်စွန်းရောက်သော အတွေးအခေါ်များစွာ ဖွဲ့စည်း ပါဝင်နေသည်။ ချစ်သူသည် မိဘ၏အရှိန်အ၀ါ တင့်တယ်မှုဖြင့် လုံခြုံနေရသည်နှင့်အတူ တချိန်တည်းတွင်ပင် ပျက်စီးမည့်အရာများပဲဟု တွေးကာ စိတ်သောက ရောက်နေတတ်သော တဘက်စွန်းရောက်သူဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့သော အတွေးအခေါ် မှားယွင်းမှုများ ချစ်သူထံတွင် ရှိနေပါသည်။ မိခင်ဖြစ်သူက ချစ်သူ၏ကျန်းမာရေးကို အလွန် ဂရုစိုက်ပါသည်။ ချစ်သူတွင် သုံးနှစ်ကြာပြီဖြစ်သော အစာအိမ်နာရောဂါ ရှိနေခဲ့ပါသည်။ ထိုရောဂါကို ချစ်သူက အလွန် မုန်းတီးပါသည်။
သို့သော် မိခင်ဖြစ်သူက ထိုရောဂါကို ဂရုတစိုက်ဖြင့် ဆေးမှန်မှန်သောက်ခိုင်းတတ်ရာ ချစ်သူသည် မိခင်၏ ဂရုစိုက်မှုကို လိုလားစွာ အစာအိမ်နာရောဂါကို မွေးမြူထားပြန်သည်။ ချစ်သူသည် သနားစဖွယ် အစွဲအလန်း ကြီးသူလည်း ဖြစ်သည်။ ထိုစိတ်အခြေအနေကြောင့်ပင် သူ၏ စိတ်ခန္ဓာကို လုံခြုံမှု ပေးထားနိုင်သည် ဖြစ်သော်လည်း သူ့ထက် အသက်အတန်းငယ်ကြီးမှု၊ ပညာအနည်းငယ်မြင့်မားမှုတို့ကို အကြောင်းပြုကာ ကိုယ့်ကို ချစ်သူမဖြစ်စေချင်သော မာနကို မွေးမြူသူလည်း ဖြစ်သည်။ ထိုမာနတို့ ကြီးမားလာသည့် အခါ-“မောင်က မိဖုရားတစ်ပါးပဲလိုချင်တာ... ဘုရင်မကိုတော့ မလိုချင်ဘူး...” ဟု ကိုယ့်နှလုံးကို မငဲ့ညှာစွာ ပြောတတ်ပါသေးသည်။ ထိုကြောင့် ချစ်သူသည် အလွန် စိတ်ပျက်အားမရဖွယ်ကောင်းသူလည်း ဖြစ်ပြန် ပါသည်။
ကိုယ်ကတော့ သူ့နွံအတွင်းမှ မလွတ်မြောက်နိုင်သူပဲ ဖြစ်ပါသည်။ စိတ်နိမ့်ကျမှုနှင့် စိတ်ရောဂါ ရိုက်ခတ်မှုတို့ ရှိနေသော ချစ်သူကို ကြင်နာစွာ မစွန့်ပစ်နိုင်သော သံယောဇဉ်တို့ဖြင့် ချစ်သူ့နွံအတွင်း နစ်နေသူလည်း ဖြစ်ပါသည်။
ချစ်သူတွင် လိုအပ်နေသော နွေးထွေးသည့် မိဘအချစ်နှင့် သိပ်သည်းသော ချစ်သူတို့ကို ကိုယ်ကသာ နားလည်စွာ ပေးအပ်နိုင်သည်ဟူသော သူရဲကောင်းစိတ် (ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးစိတ်)တို့ဖြင့် မောင့်နံဘေး တွင် ရပ်တည်နေမိသည်။
၀န်းကျင်တခုတွင် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ လူသိများသော၊ ၀န်းကျင်က သဘောကျသော ချစ်သူစုံတွဲဘ၀ကို တပ်မက်လှစွာ နားလည်နိုင်သူတို့သာ တန်ဖိုးထားသော မောင့်အနုပညာအောင်မြင်မှုကို မြတ်နိုးစွာ မောင့်ချစ်သူဘ၀ကို ခုံမင်စွာ ကိုယ်သည် ဘ၀တွင် ကျေနပ်စွာနေထိုင်နေခဲ့ပါသည်။
ကိုယ်အတွက်မူ အချစ်ဆိုသည်မှာ မောင်ဖြစ်ပါသည်။ ချစ်သူဖြစ်ပါသည်။ ချစ်သူနှင့်ကိုယ်၏ ယိုင်လိုက် တည့်မတ်လိုက်ရှိနေသော ဘ၀လေးပင် ဖြစ်ပါသည်။ ချစ်သူ၏စိတ်ကို ထိန်းမတ်ပေးရသော ၀တ္တရားလေးလည်း ဖြစ်ပါသည်။
ပန်းချီသမားပီသလှစွာသော ချစ်သူသည် များသောအားဖြင့် ကိုယ့်ကို အလိုမကျ ဖြစ်နေတတ်သည်။ လှပသော မိန်းမပျိုလေးများကို ပန်းချီကားချပ်များကဲ့သို့ ငေးမော ကြည့်လိုသော ချစ်သူနှင့် အလွန် သ၀န်တိုတတ်သော ကိုယ်သည် မကြာခဏ ပဋိပက္ခဖြစ်တတ်ပါသည်။ ထိုအခါများတွင် ကိုယ်သည် ချစ်သူကို ဖေါက်ပြန်လိုသူဟု ရင်တွင်းမှ အကြိမ်ကြိမ် စွပ်စွဲကာ အလွန် သောကများရပါသည်။
နှုတ်မှ ဖွင့်ပြောလျှင် အေးဆေးသော ချစ်သူ စိတ်ညစ်မည်ကို စိုးမိပါသည်။ သို့သော် ချစ်သူ၏ပွင့်လင်းရိုးစင်းမှုကို သိသော ကိုယ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လည်း အဆုံးတွင် ချစ်သူနှင့်အတူ အလှအပတို့ကို လိုက်ပါ ခံစား ရစမြဲပင် ဖြစ်သည်။
ချစ်သူသည် “မောင် အချစ်ကို သိပ်တွယ်တာတာပဲ၊ သိပ်အားကိုးတာပဲ၊ အချစ်ရှိနေရင် သိပ်လုံခြုံတာပဲ” ဟု တဖွဖွပြောခြင်းဖြင့် ကိုယ့်ရင်ကို ချည်နှောင်နိုင်ပါသည်။ ကိုယ်ကလည်း ချစ်သူ့အပေါ် သံယောဇဉ်ကြီးစွာ သူ၏ဆိုးမျိုးကို သည်းးခံနိုင်ခြင်းဖြင့် ချစ်သူကို ချည်နှောင်ထားပါသည်။ ထိုချည်တွယ်မှုသည်ပင် အချစ် ဖြစ်သည်ကို အလွန် ရိုးစင်းသောမောင်က နားမလည်တတ်သေးပါ။ ထို့ကြောင့်ပင် ကိုယ့်ကိုချစ်သည် ဟူသော အသုံးအနှုံးမျိုးမသုံးခြင်းဖြစ်မည်ဟု ကိုယ်က ယူဆပါသည်။
ချစ်သူသည် မည်သို့မျှ အစားထိုးမရနိုင်သော အရည်အချင်းများစွာကို ပိုင်ဆိုင်သည်။ ချစ်သူပီသသော အပြုအမူ အနေအထိုင်နှင့်တကွ စကားချိုတို့ကို မဖေါ်ပြတတ်သော မောင်သည် ဘ၀ဖွဲ့ အချစ်ဖွဲ့ကဗျာများစွာကို အောင်မြင်နိုင်စွာ သီကုံးနိုင်သည်။
ဖန်တီးရခက်ခဲဟန်ရှိသော ပန်းချီအလှများစွာကိုလည်း ဖန်ဆင်းနိုင်သည်။ နက်နဲသိမ်မွေ့သော အသိတရား များစွာကိုလည်း ဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းသည်။ အထူးသဖြင့် အကြည့်တစ်ချက် အပြုံးတစ်ချက်မျှနှင့်ပင် သူ၏ချစ်သူ (ကိုယ့်)ကို စည်းရုံးနိုင်စွမ်းသူ ဖြစ်ပါသည်။
ချစ်သူသည် ဆန့်ကျင်ခြင်းများစွာနှင့် ဒွန်တွဲဖြစ်တည်နေသူဖြစ်သည်နှင့်အတူ ကြောက်ရွံ့ နာကျင်နေခြင်း၊ မိမိပိုင်အရည်အချင်းကို ယုံကြည်စွာ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် နေပျော်သည်နှင့်အတူ ၀န်းကျင်၏ပုပ်အဲ့မှုကို ရွံမုန်းစွာ စိတ်ပျက်နေတတ်ခြင်း၊ ချစ်သူ(ကိုယ့်)ကို ချစ်ခင် တွယ်တာမှုနှင့်အတူ အပူအပင်ကင်းစွာ အနှောင်အဖွဲ့ကင်းစွာ နေလိုခြင်းတို့နှင့် မောင်သည် ပူလောင်ခြင်းတလှည့် ငြိမ်းအေးခြင်းတလှည့်နှင့် နေရသူပင် ဖြစ်ပါသည်။ ချစ်သူသည် အလိုလောဘကြီးစွာဖြင့် ပူလောင်တတ်သူလည်း ဖြစ်ပါသည်။
ချစ်သူကို မာမီနှင့်ဒက်ဒီ နားမလည်နိုင်ပါ။ ညီနှင့်ညီမကလည်း နားမလည်နိုင်ပါ။ ချစ်သူ၏ ရည်းစားဦးကလည်း နားမလည်နိုင်ပါ။ ထို့အပြင် ကိုယ်ကလည်း နားမလည် နိုင်ခဲ့ပါ။ အဆုံးတွင် ချစ်သူသည် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပင် နားမလည်ပါ။ ထိုအခါ သူ၏ အလိုမပြည့်သော ဘ၀ကို တပ်မက်ဖက်တွယ်ကာ မသိခြင်းများအကြားတွင် ချစ်သူ သည် ယဉ်ပါး နေခဲ့ပါသည်။
ချစ်သူနံဘေးတွင် ကိုယ် အမြဲရှိနေပါသည်။ ချစ်သူ၏စိတ်အာရုံနှင့် နှလုံးသည်းပွတ်တွင် ကိုယ် အမြဲ ရှိနေပါသည်။ ချစ်သူ၏ နှုတ်ဖျားတွင် မည်သူ့ကိုမျှ မချစ်ကြောင်းများ ရှိနေပါမည်။ (ချစ်သူက မည်သူ့ကှိုမျှ မယုံပါ။) ချစ်သူ၏ ရင်တွင်းတွင် လောကအတွင်း အနေရခက်မှုဟူသော ဝေဒနာများ ရှိနေပါမည်။ ချစ်သူ၏ နက်ရှိုင်းလှသော ရင်တွင်း တနေရာတွင် သိမ်မွေ့သိုဝှက်လှသော “အချစ်”တရား ရှိနေပါမည်။ ထိုအချစ်သည် ကိုယ် မဟုတ်ပါ။ ဒက်ဒီ မဟုတ်ပါ။ မာမီ မဟုတ်ပါ။ ညီနှင့်ညီမလည်း မဟုတ်ပါ။ ရည်းစားဦးလည်း မဟုတ်ပါ။ ချစ်သူကိုယ်တိုင် လည်း မဟုတ်ပါ။ သေချာသည်မှာ ချစ်သူကိုယ်တိုင်ပင် မသိသော လိုအင်ဆန္ဒတစ်ခုသာ ဖြစ်ပါသည်။
သေချာသည်မှာ ချစ်သူ၏ရင်တွင်း၌ ပုပ်သိုးသော စိတ်ထားမရှိပါ။ ကောက်ကျစ်သော စိတ်ထား အကြံအစည် မရှိပါ။ ညစ်ညမ်းသော စကားလုံးများလည်း မရှိပါ။ ထိုအခါ... ကိုယ်သည် ချစ်သူကို တန်ဖိုးထားစွာ မြတ်နိုးလှ ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ချစ်သူ၏လိုအင်ဆန္ဒ ကို ကိုယ် ဖြည့်ဆည်းရပါသည်။
ချစ်သူအတွက် စာကြိုးစားရပါသည်။ အလှပြင်ရပါသည်။ ချစ်သူနှင့်အတူ လမ်းလျှောက်ရပါသည်။ စိတ်ကောက်တတ်သည့်အကျင့်ကို ဖျောက်ရပါသည်။ ကဗျာရေး စာရေးခြင်းကို ချစ်သူလောက် မချစ်ဘဲ နေရပါသည်။ မိန်းမပီသစွာ နူးညံ့ သိမ်မွေ့ရပါသည်။ ထို့အပြင် ချစ်သူအလိုမကျ၍ ဖြုတ်သောလက်တွဲကို ဘာသာ လိုက်လံဖမ်းယူ ဆုပ်တွဲရပါသည်။ ချစ်သူ၏လက်ဖ၀ါးကို ကိုင်ဆုပ်ကာ လမ်းလျှောက်ရပါသည်။ ၀မ်းနည်းသော်လည်း မငိုသည့် စိတ်ခိုင်မာမှုကို မွေးယူရပါသည်။ တနည်းတဖုံဖြင့်မူ ချစ်သူသည် ကိုယ့်ကို လက်နက်ကောင်းများစွာ တပ်ဆင်ပေးသည်ဟုပင် ဆိုရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ့်အမြင်ဖြင့်မူ ချစ်သူသည် အရာရာကို ဖန်တီးနိုင်စွမ်းသော ဖန်ဆင်းရှင် ဖြစ်ပါသည်။ လောကကို အနုပညာဖြင့် အနိုင်ရနေသော သူရဲကောင်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ချစ်သူမိန်းကလေးတစ်ဦးကို လိုရာပုံ သွင်းနိုင်သော ပန်းပုဆရာကောင်းတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ ချစ်သူသည် ကိုယ့်ဘ၀တွင် ပန်းများကို ပွင့်စေသူ၊ နေခြည်သာကို ထွန်းတောက်စေသူ၊ စမ်းရေသံသာကို စီးဆင်းစေသူဟု ကိုယ်က ယူဆပါသည်။ ထိုအခါ... ချစ်သူသည် ကိုယ့်လူမှုလောကအတွင်းတွင် ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်စွာ ခိုင်မာစွာ စွဲမြဲနေပါ တော့သည်။
ချစ်သူဟူသည် ချစ်ရသောသူတဦးဖြစ်ရန်သာ လိုအပ်သည်ဟုလည်း ကိုယ်က ယူဆသည်လေ။
(ကိုခင်ဝမ်းရဲ့ ပန်းချီကားတွေ ယူသုံးထားတာပါ..။ မူရင်းဝတ္ထုတိုမှာတုန်းကလည်း ကိုခင်ဝမ်းရဲ့ Illustration နဲ့ပါပဲ)
at March 25, 20082comments:
ဘ၀လက်တွဲဖော်...တဲ့။ စိုးဝှက်ကလေးက Tag တော့ တကယ်ပဲ ချက်ချင်းရေးချင်သွားတာ။
ဒါပေမဲ့ စိုးဝှက်က ဇာတိမြေကို အရင် Tag တာမို့ ဇာတိမြေကို အရင်ရေးရ။ ကျမအတွက်တော့ အဲဒီ ဘ၀လက်တွဲဖော် ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးက တကယ်ပဲ ရေးချင်စရာလေးပါ..။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ခု အသက်၄၀ကျော်လာတဲ့အရွယ်မှာ ဘ၀မှာ လက်တွဲဖော်ဟာ တော်တော် အရေးကြီးပါလားလို့ သိလာတဲ့အခါ ကိုယ်ရေးတဲ့စာတွေကို ဖတ်နေတဲ့သူတွေအထဲက ဘ၀လက်တွဲဖော်အကြောင်း စဉ်းစားနေရပြီ ဖြစ်တဲ့သူတွေ အတွက် ထည့်စဉ်းစားစရာ ရကောင်းရဲ့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ရေးချင်လာတာပါပဲ။ (အဲဒီကြားထဲ ထုံးစံအတိုင်း စီဘောက်မှာ မကြားဝံ့မနာသာတွေ အရေးခံရသေး)
ဘ၀လက်တွဲဖော်ဆိုရင်တော့ ကျမတို့ ဗမာပြည်မှာက အိမ်ထောင်ဖက်ကို ရည်ရွယ် ပြောတာပါပဲ။ တဘ၀လုံးကို အတူဖြတ်သန်းဖို့ အဖော်ပေါ့။ အနောက်တိုင်းမှာကတော့ အိမ်ထောင်ဖက်မဟုတ်ဘဲလည်း ဆာ့တ် နဲ့ ဒီဗူးဗွား လို တသက်လုံးအတူနေသွားတဲ့ ချစ်သူတွေ..၊ 'ဗင်ဂိုး' နဲ့ 'သီအို' တို့လို နောက်ဆုံးအချိန်ထိ သံယောဇဉ်ကြီးကြီးနဲ့ အတူနေသွားတဲ့ ညီအကိုတွေ.. ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကျမ မှတ်မိသလောက် ကျမငယ်ငယ်က တော်တော် စိတ်ကူးယဉ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘ၀ဖော်ကို ဘယ်လိုလူမျိုးလိုချင်လဲလို့တော့ မစဉ်းစားမိခဲ့ဖူးဘူး ထင်တာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လို ယောက်ျားလေးမျိုးကို သဘောကျလဲဆိုတာတော့ ရှိတာပေါ့နော်..။ သေချာတာ တခုကတော့ မိန်းကလေးအများစုလိုပဲ ကျမက ရုပ်ချောတဲ့ ယောကျာ်းကိုပဲ လက်ထပ်ချင်တာတော့ ရှိပါတယ်။ ကျမစိတ်ထဲမှာ ရှိတာက ကိုယ့်ဘ၀မှာ အကြာကြီး အတူနေသွားရမယ့်သူ.. ကိုယ့်အနေနဲ့ ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်း ဆက်ဆံ နေထိုင်သွားရမယ့်သူက ရုပ်ချောချောလေးဆိုရင်တော့ စိတ်နည်းနည်း ရှည်ရှည်ထားနိုင်မှာပဲလို့ ထင်တာလေ။ ပြီးတော့ ကျမက ကိုယ်တိုင်ကသာ မလှတာ အလှအပကျတော့ အင်မတန် ကြိုက်တယ်။ အိမ်ခန်းကို လှလှလေးပြင်တာကအစ ကိုယ့်ကိုယ့်ကို အလှပြင်တာအဆုံးပေါ့.. :P
တကယ်တမ်းကျတော့ အလှအပဆိုတာ တကယ်လည်း လူတွေရဲ့ စိတ်နှလုံးကို သာယာကြည်နူးစေတာပဲ မဟုတ်လား..။ ကျမက အချစ်ဝတ္ထုတွေ ရေးတဲ့နေရာမှာ အားသန်တဲ့သူ ပီပီ၊ အင်မတန်မှကို အချစ်မှာ ခံစားတတ်ပါတယ်။ ကျမက အသက်၂၀ အရွယ်မှာ ရည်းစားနှစ်ယောက် ထားဖူးပြီးပြီ။ အဲဒီနောက်မှာ လက်တွဲဖော်လို့ ခံစားရတဲ့ သူနဲ့ တွေ့ပါတယ်။ သူနဲ့ ချစ်သူဖြစ်တာ ၃နှစ်မပြည့်တပြည့်မှာ လက်ထပ်တယ်။ အဲဒီတုန်းက သူ့ရဲ့ ဥာဏ်ကောင်းမှု၊ ထူးခြားမှု၊ အေးချမ်းမှုနဲ့ အနုပညာကို အင်မတန်ကြိုက်မိ..။ သူက ကျမအကြိုက်ဆုံး ကဗျာဆရာလည်း ဖြစ်သေး။ ပြီးတော့ သူကလည်း ဖြူဖြူချောချောလေး (သူ့ကို ကြိုက်နေတဲ့ ကောင်မလေးတွေကဆို ကိုယ်နဲ့ မတန်ဘူးလို့တောင်ပြောတာ :D)။ တော်တော် ချစ်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်း ထင်ပါ တယ်။ ၁၉၈၅ ကနေ ၁၉၈၈ထိ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲမှာ တော်တော် လူသိတဲ့ စုံတွဲတတွဲပေါ့.. :P
နောက်တော့ ကျမက အသက် ၂၁နှစ်နဲ့ ဆရာမဖြစ်ချိန်မှာ ကျောင်းပျော်တဲ့ သူက စာတော်လျက်နဲ့ ကျောင်းမပြီးသေး..။ ဒီလိုနဲ့ အပြန်အလှန် စိတ်မချမှုတွေနဲ့ လက်ထပ် ဖြစ်ကြရော..။ (တကယ်တော့ ကျမနဲ့သူက 'ဆာ့တ်' နဲ့ 'ဒီဗူးဗွား' လိုပဲ နေချင်တာ.. ဒါမဲ့ ဗမာပြည်မှာက ဘယ်ရပါ့မလဲနော်..။ တကယ်လို့ အဲလိုသာ နေဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် ကွဲချင်မှ ကွဲမှာလို့ ထင်မိဖူးပါသေးတယ်)။ နောက်တော့ ... စိတ်သဘော မတိုက်ဆိုင်မှုတွေ၊ မာနတွေ၊ မတူညီတဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေထဲ.. မတူညီတဲ့ တန်ဖိုးထားမှုတွေထဲ.. မတူညီတဲ့ စွဲလန်းမှုတွေထဲ.. သားကလေးတယောက်သာ ဓားစာခံအဖြစ် ကျန်ရစ်၊ တယောက်တလမ်းစီ လျှောက်ခဲ့ ကြတာ.. လူ့လောကထဲက သူထွက်ခွာသွားတာတောင် နှုတ်မဆက်ဖြစ်တော့။ (တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါပဲ.. လူ့လောကထဲ သူရှိနေသေး မယ် ဆိုရင် ဒီနေ့ဟာ အသက်၄၂နှစ် ပြည့် မွေးနေ့ပါ)
အဲလိုနဲ့ ပထမလက်တွဲဖော်နဲ့ လမ်းခွဲကြစဉ်တုန်းက အသက် ၂၈နှစ်အရွယ်..။ ဘ၀ဆိုတာ ဒါပဲ ထင်ပါရဲ့ပေါ့..။ အချစ်ဆိုတာထဲမှာ ခွင့်လွှတ်မှု မပါတာလား..။ အလျှော့ပေးမှုတွေပဲ လိုနေတာလားပေါ့..။ ကိုယ်တိုင် စွဲလန်းခဲ့တာတွေကိုတောင် စိမ်းသက် လာတဲ့အခါ မဖြစ်သင့်တဲ့ အိမ်ထောင်ကျိုးဖို့ကိုတောင် မကြောက်တတ် တော့တာ။ ခက်တာက နောင်တ မရခဲ့တာ။ ကိုယ်က အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားခဲ့လျက်နဲ့ဆိုတဲ့ မာနတွေနဲ့..။ တကယ်တော့ အဲဒီ ပင်လယ်ထဲ နှစ်ယောက်စလုံး ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာပါ။
အသက်၃၀မှာကျတော့ အချစ်ဆိုတာ ရင်ခုန်စရာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ ထင်တတ်ခဲ့ပြီ။ အနားမှာ ငဲ့ကြည့်စရာ သားကလေးတောင် ၄နှစ်သားရှိနေပြီ။ 'ဘ၀ဆိုတာ သားကလေးပဲ'..တဲ့။ အဲဒီဘ၀ထဲ အလဲလဲအပြိုပြို အယိုင်ယိုင်အနဲ့နဲ့.။ ဘ၀ပင်လယ်ထဲ နိုင်ငံရေးလှိုင်းတံပိုးတွေပါ ရိုက်ခတ်။ တယောက်တည်းလို့ ခံစားရတာတွေ များလာတယ်။ ဒီလို မထင်မှတ်တဲ့ အချိန်မှာလည်း အချစ်ဆိုတာ ၀င်တတ်တာပါလားလို့ သိချိန်မှာ နဘေးကို လူငယ်လေး တယောက် ရောက်နေတာ တွေ့လိုက်ရတယ်။ မဖြစ်နိုင်ဘူး..၊ မဖြစ်သင့်ဘူး..၊ အဲလို စိတ်တိုက်ပွဲတွေထဲ အထပ်ထပ်အခါခါ တိုက်ပြီးမှ ..
အသက်၃၀ကျော်ကာမှ ဘ၀လက်တွဲဖော်ဆိုတာ... စိတ်ထားကောင်းရှိဖို့က အဓိက..၊ ပြီးတော့ ကိုယ်က ချစ်ဖို့၊ ကိုယ့်ကို ချစ်ဖို့၊ အပြန်အလှန် အနစ်နာခံနိုင်ဖို့၊ အပြန်အလှန် တန်ဖိုးထား နားလည်နိုင်ဖို့... အရေးကြီးဆုံးက ခွင့်လွှတ်လွယ်ဖို့.. လို့ သတ်မှတ်မိသွားတာ။ အိုးးး အံ့သြစရာပဲ.. အဲဒီ ကိုယ့်ထက် အသက်အများကြီးငယ်တဲ့ လူငယ်လေးက အဲဒီအချက် အားလုံးနဲ့ ပြည့်စုံနေတော့..။ ဒီလိုနဲ့ ရုန်းမထွက်နိုင်တော့။ ခုဆို ၁၀နှစ်တောင် ကျော်ခဲ့ပြီ။ ခုထိတော့ သူက ကျမအတွက် ကံကောင်းခြင်းတွေပဲ သယ်ဆောင်လာပေးနေဆဲပါ။ အင်းးး ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင် ဆိုပါတော့။
ခု အသက်၄၂နှစ်မှာကျတော့ ကျမတွေးနေမိတယ်..။ တကယ်တော့ "ဘ၀လက်တွဲဖော်ဆိုတာ ကံတရားက ပေးတဲ့လက်ဆောင်" သာဖြစ်တယ်... ဆိုတာကိုပေါ့။ အဲဒီလက်ဆောင်လေးက ကိုယ့်အတွက် ဘယ်လိုခံစားမှုကို သယ်ဆောင်လာပေးမလဲ.. ကျမတို့ ကြိုမသိနိုင်။ တရုတ်စာရေးဆရာကြီး 'လူရွှန့်'ကတော့ "မယားကောင်းရရင် စိတ်ချမ်းသာမယ်.. မယားဆိုးရရင် ပညာရှိဖြစ်မယ်"တဲ့..။ အယူအဆကတော့ အတူတူပါပဲ.. ကျမတို့ မိန်းမတွေအတွက်ကတော့ နည်းနည်း ပိုဆိုးမယ်ထင်တယ်။ လင်ကောင်းရရင် စိတ်ချမ်းသာမယ်.. လင်ဆိုး ရရင်တော့ ပညာရှိဖြစ်အောင် ကြိုးစားယူနိုင်မှပဲ တော်ကာကျမယ်။ အဲဒါဆိုလည်း တမျိုးကောင်းမှာပါပဲ..။ အရေးကြီးတာက ရင်ဆိုင် ဖြတ်ကျော် လိုက်နိုင်ဖို့သာ..။
ဇာတိမြေ (သို့မဟုတ်) အိမ် အကြောင်း..တဲ့ ။ ဂျီးဒေါ်စိုးဝှက်က Tag လုပ်တော့ ရေးဖို့ စဉ်းစားရတော့တာပေါ့။
တကယ်ကတော့ လင်းလက်ကြယ်စင်လေးပြောသလိုပဲ 'ဘ၀လက်တွဲဖော်' ဆိုတာလေး အရင်ရေးချင်တာ..:D ။ ဂျီးဒေါ်က လောဘတကြီးနဲ့ နှစ်ပုဒ်ဆက်တိုက် Tag တော့လည်း တတ်နိုင်ဘူးလေဆိုပြီး စာရင်းရှင်းရ တော့တာပေါ့။ ဒါမဲ့ ပြဿနာက ကျမရဲ့ တကယ့် ဇာတိမြေအစစ် မဟာရန်ကုန်ကြီးကို ကျမက မစွဲလန်းတာပါပဲ။ ဒါဖြင့် ကျမက ဘယ်ကိုစွဲလန်းလဲ ဆိုတော့.....။
အဖေနဲ့အမေက ပုသိမ်ဇာတိဖြစ်ပေမဲ့ အိမ်ထောင်ဦးမှာတော့ ရန်ကုန်မြို့နဲ့ လှိုင်မြစ်(ရန်ကုန်မြစ်)ကြီးခြားနေတဲ့ သန်လျင်(တညင်)မှာ အိမ်ငှားနေရပါတယ်တဲ့။ အမေက ကျမကို သန်လျင်(တညင်)က မြို့ဟောင်းလမ်းမှာ နေတုန်း ကိုယ်ဝန်ရတယ်တဲ့။ အဲဒီတုန်းက အဖေ နဲ့ အမေ ငှားနေတဲ့ အိမ်ကလေးဘေးမှာ မြရာပင်တွေ ၀ိုင်း လို့တဲ့..။ အဖေက သိပ်သဘောကျတာတဲ့။ လမ်းထိပ်နား ထွက်လျှောက်လိုက်ရင် မွေ့နွန်းကုန်းတဲ့။ ဒဏ္ဍာရီထဲမှာ ရှင်မွေ့နွန်းက မင်းနန္ဒာရှိတဲ့ ဒဂုန်မြို့ကြီးဘက် ထွက် ထွက် မျှော်တဲ့ ကုန်းဆိုပဲ။ သန်လျင်ကို အဖေက တဖွဖွ ပြော လွန်းလို့ ကျမ လူကြီးဖြစ်မှ အဲဒီ အဖေနဲ့အမေ အိမ်ထောင်ဦးတုန်းကနေခဲ့တဲ့ ကျမကို ဇာတိတည်စေခဲ့ တဲ့ အိမ်နေရာလေးနဲ့ မွေ့နွန်းကုန်းကို သွားကြည့်ဖြစ် အောင် ကြည့်ခဲ့တယ်။ အိမ်ဟောင်းလေးက ယိုင်တောင် နေပြီ။ တကယ်ပဲ မြရာပင်တွေ ပတ်လည်ဝိုင်းလို့။ အံ့သြစရာကောင်းတာက ဘ၀ထဲ စိတ်အကျဉ်းအကျပ် ကျ လွန်းပြီး တနေရာမှာ ပုန်းနေလိုက်ချင်စိတ်ပေါက်တဲ့ အခါတွေဆို.. ဘာလို့မှန်းမသိ.. အဲဒီ အိမ်လေးကို အမြဲ သတိရတတ်တယ်.. လွမ်းနေမိတတ်တယ်။
နောက်တော့ ကျမအသက် ၉နှစ်သမီးမှာ အဖေ့အလုပ် တာဝန်နဲ့ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းက ကျောက်မဲမြို့ကလေး ကို ပြောင်းရတယ်။ စနေတနင်္ဂနွေနဲ့ ရုံးပိတ်ရက် ဆက်တာ ကြုံပြီဆို အဖေက သီပေါတို့ လားရှိုးတို့ နောင်ချိုတို့ တနေရာစီ လိုက်ပို့တတ်တယ်။ အဲဒီ မြို့လေးမှာ နေခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေမှာ ကျမ သိပ်ပျော်တာပဲ။ တိုက်တိုက် ဆိုင်ဆိုင် အဖေငှားနေတဲ့ အိမ်မှာ ကျမတို့က 'ကြီးအိမ်'လို့ ခေါ်တဲ့ ရှမ်းလူမျိုး အဖွားတစ်ယောက် ရှိတယ်။ မိုးလင်း တာနဲ့ ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့် သနပ်ခါးတွေဖွေး မွှေးနေ ပြီး ပြုံးနေတတ်တဲ့ ကြီးအိမ်ကို ကျမ တော်တော် ချစ်တာ။ မနက်လင်းပြီဆို.. ခေါပုတ်ကြော်.. ရေနွေးကြမ်း.. တို့ဟူး ကြော်..။ တခါတလေ.. တို့ဟူးနွေး.. ဆန်ခေါက်ဆွဲ...။ ကျမအကြိုက်ချည်းပဲပေါ့..။
အဲဒီ ကျောက်မဲနားမှာပဲ ကျမ အင်မတန်သဘောကျတဲ့ နမ့်ဟူးတောင်းဆိုတဲ့ရွာလေးလည်း ရှိသေးတာ..။ အဲဒီရွာကလေးမှာ ကျမချစ်တဲ့ မြို့မငြိမ်းက စစ်ရှောင်ရင်း လာနေခဲ့ဖူးတယ်လို့ နောက်ပိုင်းမှာ သိရတော့ ပိုကြွေသွားရသေးတယ်။ (အဲဒီ ရွာကလေးအကြောင်းရေးတဲ့ ၀တ္ထုတိုတပုဒ် တင်ပေးဖို့ရှိလို့ အကျယ် မရေးတော့ ဘူးနော်)။ ခုထိ မနက်မိုးလင်း အိပ်ယာအနိုးမှာ နေရောင်လင်းလင်းအောက်မှာပဲ ရာသီဥတုလေးက အေးစိမ့်စိမ့် ဖြစ်နေရင်.. ကျောက်မဲ မနက်ခင်းတွေ နမ့်ဟူးတောင်ရွာကလေးရဲ့ မနက်ခင်းတွေကို သတိရတုန်း။ ကျောက်မဲအိမ်ကလေးက ကောက်ညှင်းလဘက်ခြောက် ခပ်ထားတဲ့ ရေနွေးကြမ်းပူပူနဲ့ ခေါပုတ်ကြော်ကို သတိရတုန်း..။ လွမ်းတုန်းပါ..။
နောက်တော့ ကိုယ်တိုင် တက္ကသိုလ်မှာ ဆရာမဖြစ်ပြီးတော့ ရာထူးတိုးချိန် နယ်ပြောင်းရမယ်ဆိုတော့ ကိုယ် ပြောင်းချင်တဲ့နေရာတောင်းလျှောက်ရမယ်တဲ့..။ အဲဒီမှာ အင်မတန် စိတ်ကူးယဉ်တဲ့ ကျမက ဘယ်ပြောင်း ရမလဲ ရွေးမရဖြစ်နေခဲ့တာ။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အဲဒီ အချိန်လေးမှာပဲ ကိုညီထွဋ်(ဇော်ဝင်းထွဋ်)က ဘားအံ မှာ Stage Show ဆိုပြီးပြန်လာခါစ။ ကျမကို 'ဘားအံကို လျှောက်ပါလား..'လို့ အကြံပေးပါတယ်။ "ဘားအံက ရန်ကုန်နဲ့လည်း နီးတယ်.. ကရင်လူမျိုးတွေရဲ့ မျက်လုံး တွေကလည်း တကယ့်အဖြူထည်.. ရိုးသားတာ သစ္စာ ရှိတာကို ဖောက်မြင်နေရတယ်.. မိုက်တယ်.. အဲဒီကို သွားပါလား.. " တဲ့။
ကျမကလည်း ကိုယ့်နိုင်ငံထဲ နေရာတော်တော်များများ ရောက်ဖူးပေမဲ့ ရန်ကုန်နဲ့ ဘယ်လောက်မှ မဝေးတဲ့ ကရင်ပြည်ကိုကျတော့ မရောက်ဖူးသေး။ ဒါနဲ့ပဲ ဘားအံကောလိပ်ကို ရောက်ဖြစ်ခဲ့ရတော့တာ။ (အဲဒီမှာ ကလေးတို့အဖေနဲ့ တွေ့ပြီး ဖူးစာဆုံတော့တောင် ကိုညီထွဋ်ကြောင့်ပေါ့လို့ လွှဲချလိုက်သေးတယ်.. :P)။ အဲဒီနောက်တော့ တကယ်ပဲ စွဲလန်းသွားရတဲ့.. ဘားအံ ကောလိပ် ကျောင်းဝင်းလေးရယ်.. ကျမ နေရတဲ့ အိမ်ဝင်းလေးရယ်.. တကယ်ပဲ ဖြူစင်ပြီး ချစ်စရာကောင်း လှတဲ့ တပည့်လေးတွေရယ်.. ကုန်းတက်ကုန်းဆင်းတွေနဲ့ လှပသာယာတဲ့ ဘားအံမြို့လေးရယ်.. မှော်ဆန်တဲ့ ပုံသဏ္ဍန်ရှိတဲ့ ဇွဲကပင်တောင်ကြီးရယ်.. စိတ်ကူးယဉ် ဆန်တဲ့ သံလွင်မြစ်ကြီးရယ်.. ပြီးတော့ ဆရာခမ်းလိတ်နဲ့ ဘိုထီးတို့ရဲ့ "သံလွင်ချောင်းခြား အမှာစကား" သီချင်း တစ်စ..ရယ်။ ။
ဘာပဲပြောပြော.. အဲဒီမှာ ကျမ တသက်စာ မေ့မရနိုင်စေမယ့် ဘ၀အိမ်လေးတခု ရှိခဲ့ဖူးတာ။ ခုထိ ပြန်တွေးတိုင်း လွမ်းပြီး မျက်ရည်လည်ရတုန်း..။ အဲဒီအချိန်လေးဆီ ပြန်သွားချင်တုန်း...။
နောက်တော့ သံလွင်မြစ်ကြီးကိုပဲ ဖြတ်ပြီးသွားရပြန်တဲ့ တောင်ညိုတောင်တန်းတွေရဲ့ နဘေး၊ မော်လမြိုင် တက္ကသိုလ် တောအုပ်ကြီးထဲက အိမ်ခန်းကလေး..။ တက္ကသိုလ်ဆိုတာကို တကယ် ဘုရားစူးကျိန်ပြောပြရမယ့် နေရာလေး။ သစ်ပင်အုပ်တွေနဲ့ လျှိုမြောင် စမ်းချောင်းနဲ့၊ အိမ်ရှေ့မှာ စိုက်ခင်းပိစိကလေးနဲ့။ မိသားတစု လုံးထွေး ပူးကပ်ပြီး အနေဆင်းဆင်းရဲရဲထဲ ပျော်ခဲ့ကြတာပါပဲ။ အဲဒါ လည်း ဇာတိမြေမဟုတ်ဘဲ လွမ်းရတဲ့အိမ်..။
ခုတော့ဖြင့်.. တကယ့်ဇာတိနိုင်ငံနဲ့ တကယ် ဝေးရပြီ ဆိုတော့.. ကျမဘယ်တုန်းကမှ လွမ်းစရာလို့ မထင်ခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်မြို့ပြကိုလည်း လွမ်းရပါပြီ။ အဲဒီအခါ အိမ်အလွမ်းထဲမှာ ပုဂံ သဗ္ဗညုစေတီပေါ်က ကြည့်ရတဲ့ နေ၀င်ချိန်လည်း ပါတယ်။ တောင်ချွန်းတောင်ပေါ်ကနေ တောင်ကြီးမြို့ကို ဆီးကြည့်ရတဲ့ မြင်ကွင်းလည်း ပါ တယ်၊ မန်းလေး စိန်ပန်းရပ်ထဲက မြီးရှည်ဆိုင်လည်း ပါတယ်။ မေမြို့က စထော်ဘယ်ရီဖျော်ရည်လည်း ပါတယ်။ မိထ္ထီလာက နို့ခဲကြော်လည်း ပါတယ်။ ပျဉ်းမနားက ခရမ်း ချဉ်သီးယိုလည်း ပါတယ်။ ပဲခူးက မနီငါးဖယ်ချဉ်လည်း ပါတာပဲ။ ပြည်က ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲလည်း ပါသေး။ နှစ်တိုင်းနီးပါး ကျိုက်ထီးရိုးတောင်ဆီကို လူသွားလမ်း ကနေ ပျော်လည်းပျော် မောလည်းမောနဲ့ တက်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေကလည်း အမြဲတမ်းအတွက် အမှတ်တရအလွမ်းတွေပဲပေါ့။
ကဲ... သမီး စိုးဝှက်ရေ.. တကယ်တော့ ဇာတိမြေကို လွမ်းဟေ့ဆို ... တကယ့်ကို လွမ်းလောက်တဲ့ တနိုင်ငံလုံး ဘယ်လိုကုန်အောင်ရေးရပါ့..။ ခုထိကို လွမ်းနေရတာတွေ မကုန်နိုင်သေး..။ တကယ်တော့ အဲဒီမြေကပဲ ကျမတို့ရဲ့ လွမ်းစရာအိမ်ပဲ မဟုတ်လားလေ..။
at March 21, 20089comments:
(Edvard Munch ရဲ့ The kiss)
ထိုညကို သူမဘယ်တော့မှ မေ့ပျောက်သွားနိုင်မည်မထင် ။
ထိုည မတိုင်ခင်က သူမစိတ်အထင်ဖြင့် ညများစွာ…။
စင်စစ်တော့ နှစ်ဆယ့်တစ်ည ကြာအောင် ကိုကိုကျော်၏ပြတင်းတံခါးတို့ ပိတ်နေခဲ့၏ ။
တံခါးရွက်တို့ ပိတ်စေ့နေကြသောရက်များကို ပြက္ခဒိန်မှာ သူမ မှတ်သားထားရာ မှတ်မှတ်ရရ နှစ်ဆယ့်နှစ်ရက် မြောက် ည မှာတော့ သူမ မျှော်လင့်တောင့်တနေသည့် တံခါးရွက်တို့ ပွင့်လာခဲ့ကြသည်။ အမှောင်ထဲမှာ သူမအပြုံးတို့ တောက်ပနေလိမ့်မည်။ ဘာကြောင့်ဆို တံခါးရွက်တို့ကို ဖွင့်သူက ကိုကိုကျော်ပဲ ဖြစ်ခဲ့၏။ သိပ်မျှော်လင့်ရကျိုးနပ်တာပဲကွယ် ဟု သူမနှုတ်မှပင် ထုတ်ဖော်ရေရွတ်မိတော့သည်။
ကိုကိုကျော်က သူမ တခါမှမမြင်ဖူးသော သဏ္ဍန်ဖြင့် ရှိနေသည်။ ရင်ဘတ်တွင် စာတန်းများပါသော တီရှပ် အနက်ရောင် လက်ပြတ်နှင့် ခါတိုင်းလိုလည်း ဆံပင်တွေ ဖရိုဖရဲ ရှိမနေ။ ပြီးတော့ ပြတင်းအပြင်ကိုငေးနေသော မျက်လုံးများကလည်း အရောင်တွေ ထွက်နေသလိုပါပဲ။ နှုတ်ခမ်းတွေကရော ပြုံးတော့မလိုပဲ။ ကိုကိုကျော် ပျော်နေတာလားဟင်။
လေအလွင့်မှာ ခန်းဆီးစလွင့်တော့ ကိုကိုကျော်က ခန်းဆီးစကို ထောင့်တစ်ဖက်မှာ စုပြီး စည်းနှောင်၏။ ခန်းဆီးစက အသစ်ပဲ။ သည်တော့မှ သူမမြင်နေကျ မြင်ကွင်း၏ထူးခြားမှုကို သတိပြုမိတော့သည်။
သူမ မြင်နိုင်သမျှ အတိုင်းအတာအတွင်းရှိ ကိုကိုကျော့်အခန်းက အပြင်အဆင်နှင့်အတူ အရောင်ပါ ပြောင်းလဲ နေသည်ပဲ။ အခါတိုင်း စိမ်းပြာရောင်ဖျော့ဖျော့နံရံက ခုတော့ ပြာလွင်လို့။ နောက်ပြီး အခန်းခြေရင်းမှာ ဗီရိုကြီး တစ်လုံးကို တစ်စွန်းတစ်စ မြင်နေရပြန်သည်။
ကိုကိုကျော် စာမဖတ်တော့ဘူးလား…ဟင်။ ဒါမှမဟုတ် ဂစ်တာမတီးတော့ဘူးလား။ တီရှပ် အနက်ရောင် ကြောင့်ပဲလား၊ ညမီးရောင်ကြောင့်ပဲလားတော့ မသိ။ ၀င်းဝါသော ကိုကိုကျော့် လက်မောင်းသားတွေက စိုလက်နေကြ၏။ ထိုလက်မောင်းကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဖက်ထားချင်လှသည်။
ဖေဖေ့ကို မှီတွယ်အားကိုးသလို အားရှိမှာပဲ ထင်သည်။ ကိုကိုကျော်က သူမရှိရာ ပြတင်းကို တချက် မော့ကြည့် လိုက်သည်။ အို …. သူမမျက်လုံးတွေများ သိပ်တောက်ပနေရင် သူ မြင်သွားတော့မည်။ မျက်လွှာကို ပိတ်ချဖို့ သူမစဉ်းစားမိသည်။
အို ….. မဖြစ်သေးပါဘူး။ ကိုကိုကျော့်အနားမှာ စကားတွေပြောလို့၊ သီချင်း နားထောင်လို့၊ မေမေနှင့် အစ်ကိုတွေရဲ့ အကြောင်းတွေကို တိုင်ပြောဖို့၊ ဖေဖေ့ကို လွမ်းကြောင်းတွေပြောဖို့၊ နေချင်တယ်မဟုတ်လား။
ခြင်ထောင်ထဲမှ လှမ်းဆွဲလိုက်လျှင် ကြိုးခလုတ်ကလေးဖြင့် အခန်းမီးကို ဖွင့်နိုင်သည်ပဲ။ အဲသည့်အခါ မီးပြတိုက်က မီးလေး လင်းလာသလို သူမကို ကိုကိုကျော်မြင်မှာ မုချပဲ။ အထွေးလေးက သတ္တိရှိနေပြီလား။ သူမကိုယ် သူမ ပြန်မေးနေမိသည်။ အမေနှင့် အစ်ကိုတွေ သိရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ သူမကို “နင်က အားကိုးရှိလို့ စွာတယ်ပေါ့ ဟုတ်လား” ဟု အဖေကွယ်ရာတွင် မာန်မဲသလို ၀ိုင်းအော်ကြဦးမှာပဲ ထင်သည်။
ဟင် … အဲသည်လိုဆို ကိုကိုကျော့်ကို ဖက်တွယ်ထားလိုက်မှာပေါ့နော်။ ဖေဖေသိရင်ရော ဖေဖေ့အပြင် နောက် တစ်ယောက်ကို ချစ်တယ်လို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရှာမလား။ ဖေဖေ့ကို ပိုချစ်တာပါလို့ ချော့ရမှာပေါ့နော်။
ကိုကိုကျော်ကကော…။ အထွေးလေးကို ချစ်မှာပါပဲ ။ အထွေးလေးက လိမ္မာတာပဲ ။ ဒီမှာနေဆို နေတာပဲ ။ ဒီလိုလုပ်ဆို လုပ်တာပဲ ။ မယုံရင် မေမေတို့ကို မေးကြည့်ပါလား ။
ပြီးတော့ ကိုကိုကျော်က သိပ်ကြင်နာတတ်ပုံရတာပဲ။ ခြင်ကိုက်တာကိုတောင် မရိုက်ဘဲ လက်နဲ့ယက်ပြီး မောင်းထုတ်တာ အထွေးလေးမြင်ဖူးတာပဲနော်။
နိုင်လွန်ဇာခြင်ထောင်၏ ထောင့်ဘက်အပြင်မှာ ခြင်ထောင်သားနဲ့ ကပ်ပြီး ကြိုးလေးတစ်ချောင်း ရှိနေသည်။ ထိုကြိုးလေးကိုဆွဲလိုက်လျှင် ကလစ်ခနဲ အသံမြည်ပြီး မီးဝါကလေး ပွင့်သွားမည်။
ထိုအခါ သူမကို ကိုကိုကျော် မြင်တော့မည်။ သူမက ပြုံးပြပြီး “ကိုကိုကျော်ကို အထွေးလေးချစ်လို့”ဟု အော်ပြောချင်သည်။ ဒါမှမဟုတ် “အထွေးလေးက ကိုကိုကျော်နဲ့ နေချင်လို့ ” ဟု ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ။ ကိုကိုကျော်က နူးနူးညံ့ညံ့ ပြုံးပြလိမ့်မည် ထင်သည်။
ချက်ချင်းပဲ သူမ ပျော်ရွှင်လာသည်။ သည်တော့ အသံထွက်အောင်ပင် ရယ်မော ပျော်ရွှင်မိတော့သည်။ ကိုကိုကျော်.. ကိုကိုကျော်… ဟုလည်း စမ်းခေါ်ကြည့်နေမိသေးသည်။
သို့ပေမဲ့ “ကိုကိုကျော်၊ ကိုကိုကျော်” ဟူသော သူမ၏ ခပ်ဖွဖွရေရွတ်သံက တဖြည်းဖြည်း တုန်လှုပ် တိုးတိတ် သွားရသည်။ သူမ၏ တွယ်တာရေရွတ်မှုကို သိပ်လှသည့် မိန်းမငယ်တစ်ယောက်က ချေမှုန်း ဖျက်ဆီး ခဲ့သည်။
သူမ၏ ကြည်နူးသာယာဖွယ် မြင်ကွင်းအောက်ကို ထိုမိန်းမက တရွေ့ရွေ့ဝင်လာသည်။ ပျော့နွဲ့သော အင်္ကျီရှည်ဖားလျားနှင့် ဆံပင်တို့ဖွာကျဲနေသော်လည်း ထိုမိန်းမက လှပလွန်းနေသည်။ ပြီးတော့ ညံ့ညံ့ သက်သက် ပြုံးလို့ ။
ကိုကိုကျော့် အနားကို ညင်ညင်သာသာ လျှောက်လာနေတာ။ ကြည့်စမ်း... ထိုမိန်းမ လာနေသည်ကို လှည့်မကြည့်ပါဘဲ ကိုကိုကျော်က သိသယောင် ပြုံးနေပြန်၏။ ကိုကိုကျော်က သဘောကျတယ်လား ။ ဟုတ်လား.. ။ သူမ လက်သီးကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်လိုက်မိသည်။
အို … မဟုတ်သေးပါဘူး ၊ ကိုကိုကျော့်နှမကော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ အို.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုကိုကျော့် အနားမှာ ဘယ်သူမှ မရှိစေချင်ဘူးနော် ။ ထိုမိန်းမက ကိုကိုကျော့် နောက်ပါးမှ နီးကပ်စွာ ရပ်လိုက်သည်။ ဟော … ကိုကိုကျော်က ငဲ့ကြည့်လိုက်၏။ ကြည့်စမ်း၊ နှစ်ယောက်သား ပြုံးလို့။ မိန်းမငယ်၏ အပြုံးကတော့ မပွင့်တပွင့်ပဲ။
ထိုမိန်းမက ခေါင်းကို ငုံ့ချလိုက်ကာ ကိုကိုကျော် ပခုံးလက်ပြင်မှာ ပါးအပ်လိုက်ပြန် သည်။ ကိုကိုကျော်က ကိုယ်ကို လှည့်လိုက်သည်။ ထိုစဉ်မှာ သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှ အပူလုံးတစ်ခု လည်မျိုဆီ ဆောင့်တက် လာသည်။ သူမကြည့်ဖူးသော ရုပ်ရှင်ကားတွေထဲမှ မင်းသားနဲ့ မင်းသမီးတွေကို သတိရမိသည်။
ကိုကိုကျော်က ခေါင်းငုံ့ထားသော ထိုမိန်းမ၏ မျက်နှာကို မေးဖျားမှပင့်ကာ မော့စေသည်။ ကြည့်စမ်း ၊ လှလိုက်တဲ့ မိန်းမ။ ပိန်ချိုင့်နေသော အထွေးလေး မျက်နှာနှင့်တော့ ကွာလှပေါ့ ။
တစ်ခုခုကို ကြိုသိနေသလို သူမ တုန်လှုပ်လာသည်။ သူမ ကိုကိုကျော့်ကို အပြီးတိုင် ဆုံးရှုံးတော့မည်။ ဒါ … သေချာသည် ။ လည်ချောင်းဝမှာ ဆို့နင့်လာသည့် တံတွေးတို့ကို ခက်ခက်ခဲခဲ မျိုလိုက်ရသည်။
ထိုမိန်းမက မျက်လွှာကို ဖိပိတ်လိုက်သည်။ ကိုကိုကျော် မျက်နှာက ထိုမျက်လွှာတွေထံ ကပ်သွားနေသည်။
သူမလည်ပင်းမှာ ယားယံလာသည်။ ရုတ်တရက် လည်ပင်းကို အလန့်တကြား စမ်းမိတော့ အခွံမာအေးခြောက်ခြောက်တစ်ခုကို ထိမိသည်။ သူမ ဘယ်တုန်းက ခြင်ထောင်အပြင်ကို ရောက်နေလဲ။ သူမလည်ပင်းဆီ ရောက်အောင် ထိုပိုးဟပ် ဘယ်တုန်းက တက်လာနေသလဲ။
သူမ ဖယ်ပစ်ဖို့ ကြိုးစားစဉ်မှာပင် ကိုကိုကျော့်ထံမှ မျက်လုံးခွာမရ။ ကိုကိုကျော်က ထိုမိန်းမပါးကို ခပ်ဖွဖွ နမ်းလိုက်သည်။ သူမ၏ပါးပြင်သို့တိုင် စူးယားသော အတွေ့က တွားတက်လာသည်။
အမယ်လေး …. ‘ပိုးဟပ်’ ၊ သူမ ခုမှ သတိဝင်လာသူလို ကြောက်လန့်ရတော့သည်။ သူမ အသံကုန် အော်ဟစ် လိုက်မိစဉ်မှာတော့ “မိအထွေးလေး ဘာဖြစ်ပြန်လဲ”ဟူသော မေမေ့အသံနှင့်အတူ သူမ၏ အိပ်ခန်းတံခါး သော့ဖွင့်သံကို ကြားရပြီး သူမအရာရာကို ခေတ္တ မေ့ပျောက်သွားရတော့သည်။
ထိုညက သူမသတိပြန်ရချိန်မှ စကာ ယနေ့ထက်တိုင် သူမ၏ပြတင်းတို့ကို သူမ မလှစ်ရဲတော့။ ထိုစဉ်မှစ၍ ပိုးဟပ်တစ်ကောင် တွားတက်ကာ သူမ၏ပါးကို ကုတ်ခြစ်သော အိပ်မက်ကို မက်လေ့ရှိလာခဲ့သည်။ အိပ်မက်ဆုံး ခါနီးလျှင်တော့ ထိုပိုးဟပ်က ကိုကိုကျော်ဖြစ်သွားရာ ထိုအိပ်မက်ကို သူမ မကြောက်ခဲ့ချေ ။ သို့ပေမဲ့ လက်တွေ့ ဘ၀ကိုတော့ ပို၍ နာကျည်းတတ်လာခဲ့သည်။
တကယ်ဆိုလျှင် အမြဲလို ဖေဖေ့ကို တမ်းတနေရသော သူမအတွက်တော့ အလွမ်းဆိုတာက မစိမ်းခဲ့ပါ။ သို့ပေမဲ့ ကိုကိုကျော့်ကို လွမ်းရခြင်းကတော့ဖြင့် နှမျောတသဖြစ်ရခြင်းတွေ၊ ပြန်လည် ရယူလိုစိတ်တွေ၊ တစ်စုံတစ်ရာကို ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းတွေဖြင့် ပြည့်နှက်ကာ ခံစားရတာ ခက်ခဲပင်ပန်းလှသည်။
ပြီးတော့ ရေငတ်ခြင်းတွေ၊ ချွေးစေးထွက်ခြင်းတွေ ပြန်လည်ကြီးစိုးလာကာ သူမ၏ညတို့က သူမကို ပြန်လည် ခြောက်လှန့်လာကြပြန်၏။ သူမသာ တခြား မိန်းမငယ်များလိုပင် ကျန်းမာ သန်စွမ်းသော၊ မူမှန်စိတ်မျိုးရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ခံရသော၊ ပြင်ပကို သွားလာခွင့်ရသော အခြေအနေကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလျှင် အင်မတန် ကျဉ်းမြောင်း သော သူမ၏လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်၌ သူမ ယခုလောက် စိတ်အကျဉ်းကျလိမ့်မည်မဟုတ်ဟု မကြာခဏ တွေးမိ တတ်သည်။
ခုတော့ ထိုဘ၀ထဲက ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်ဖို့တော့ဖြင့် သူမ ဘယ်သောအခါမှ တတ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သူမက အင်အားချည့်နဲ့လှသူ မဟုတ်လား။
ထို့ကြောင့်ပင် မောင်မောင်ဦးကို ရှုံးနိမ့်လိုက်ရခြင်း ဖြစ်မည်။ ပြီးတော့ မောင်မောင်ဦးသည် သူမအတွက်တော့ ပထမဆုံး ပိုးဟတ်လူသားလည်း ဖြစ်သည်။
မောင်မောင်ဦးက မေမေ၏ ကစားဖော်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူမထက် သုံးလေးနှစ်လောက်သာ အသက်ပို ကြီးနိုင် သော်လည်း အောင်မြင်နေသော စီးပွားရေးသမားတစ်ဦး ဖြစ်၏။ သူသည် မျက်လုံး တောက်တောက်ရှိပြီး အသားရောင်က ထာဝစဉ် နီစပ်စပ်ရှိနေတတ်၏။
သူ၏မျက်လုံးကို ပင့်ကြည့်လိုက်လျှင် အကြည့်ခံရသူအနေဖြင့် တုန်လှုပ်သွားနိုင်၏။ နေ့လယ်နေ့ခင်း ဗီဒီယို ကြည့်ဖို့ အခန်းပြင်ထွက်ကာ အောက်ထပ်ဧည့်ခန်းသို့ဆင်းတိုင်း သူမကတော့ မောင်မောင်ဦး၏ မျက်လုံး အောက်၌ တုန်လှုပ်ရတတ်သည်။
တကယ်တော့ မောင်မောင်ဦးထံ၌ သူမ သာယာကျေနပ်ခဲ့ခြင်း မဟုတ်။ ကိုကိုကျော့်အပေါ် ခံစားရသလို ပျော်ရွှင် ကြည်နူးရခြင်းလည်းမရှိ။
သို့ပေမဲ့ ထိုမောင်မောင်ဦးက သူမကို သဘောကျသည်တဲ့။ မေမေကပင် သူမ၏ကျန်းမာရေး ချူချာချို့တဲ့၍ ကျောင်းပညာပင် ဆက်မသင်နိုင်သည့် သမီးအထွေးလေးကို ထိုမောင်မောင်ဦးက သဘောကျသည်၌ ပီတိ ဖြစ်နေခဲ့သည်။
သို့ပေမဲ့ မောင်မောင်ဦးကို ရင်ဆိုင်လိုက်ရခြင်းကတော့ သူမ အပြစ်သာ ဖြစ်ခဲ့သည်။
ထိုနေ့က မေမေတို့၏ ကစားဝိုင်းစချိန် နောက်ကျခဲ့၏။ မေမေကလည်း အပြင်ထွက်သွားရာမှ ပြန်မရောက်သေး။ ပြီးတော့ တိုက်ဆိုင်လှစွာ မောင်မောင်ဦးက အစောဆုံးရောက်လာခဲ့သည်။ ကစားပွဲလုပ်နေကျ ထမင်းစားခန်း၌ မောင်မောင်ဦးတစ်ယောက်တည်း ရှိနေသည်မှန်းသိလျက်နှင့် အရောက် သွားခဲ့သည့် သူမ အပြစ်ပဲပေါ့ ။
သိပ်မလိုအပ်လှပါဘဲနှင့် မောင်မောင်ဦးကျောပေးထိုင်နေသော ရေခဲသေတ္တာရှိရာ သူမ လှမ်းသွားမိစဉ် မောင်မောင်ဦးက ထုံးစံအတိုင်း မျက်လုံးလှန်ကြည့်၏။ သူ၏ နှုတ်ခမ်းတို့က ခပ်နီနီရှိသည်။ ကိုကိုကျော်နှင့် တူသည်ထင်၏။ သူမ ကယောင်ချောက်ချား ဖြစ်လာသည်။
ဘွားလေးကပြောဖူးသည်။ မောင်မောင်ဦးက စာရိတ္တမကောင်းဘူးတဲ့၊ ပွေတယ်တဲ့။ သူက ခပ်ယဲ့ယဲ့ ပြုံးပြလာ သည်။ ကိုကိုကျော်ကတော့ ပြုံးမပြဖူးဘူးနော်။
ခုအချိန်မှာ သူမအနည်းငယ်ဖျားနေသည်။ ပြီးတော့ ကိုကိုကျော့်ကို သတိရလွန်းနေသည်။ ဖေဖေ့ကိုလည်း တမ်းတသည်။ စကားတွေပြောဖို့ပေါ့ ။ တကယ့်ကို သူမ ရင်ထဲ သိမ်းထားသမျှ စကားပြောဖို့၊ အဆိုးဆုံးကတော့ ဘွားလေး ရှိမနေတာဘဲ။ မောင်မောင်ဦးကို စကားတွေ ပြောချင်လာသည်။ ထို ဆန္ဒနှင့်ပင် သူမ ပြန်ပြုံးပြ လိုက်သည်။ သူက မျက်လုံးတွေကို မှေးစင်းလို့ ကြည့်လာ၏။ သူမရင်၌ တဆတ်ဆတ် ခုန်လာသည်။
“အထွေးလေးကို ပိုးဟပ်တွေက နှိပ်စက်လာပြန်ပြီ”။
သူမအသံက ဗလုံးဗထွေး ထွက်သွားသည်။
တကယ်ပဲ အသံက ရယ်ချင်စရာ ကောင်းလောက်အောင် သံစဉ်မညီမညာ ဖြစ်နေသည် ထင်၏။ ပုံမှန်ဖြစ် အောင် ကြိုးစားရမည်။
“ကိုကိုကျော်လည်း အမြဲပါတယ် သိလား”။
သူမစကားက အဆက်အစပ်ကွာသွား၍လား မသိ၊ မောင်မောင်ဦးက ပြုံးလိုက်သည်။
မဟုတ်သေးပါဘူး။ မောင်မောင်ဦးက ကိုကိုကျော့်ကို သိပါ့မလား။ သူမ ခေါင်းမူးလာသည်။ ညက သူမ အိပ်ပျက် ခဲ့သည်ပဲ။ အိပ်မက်မက်အပြီး ပြန်အိပ်မရဖြစ်နေခဲ့တာ သုံးနာရီနီးပါး ကြာခဲ့၏။ မောင်မောင်ဦးနံဘေးက ကုလားထိုင်မှာ သူမ ၀င်ထိုင်လိုက်မိသည်။ သူက ခပ်ငေးငေး စိုက်ကြည့်ကာ သူမဆံပင်တွေကို ခပ်ဖွဖွ တို့ထိ လာသည်။ ဖေဖေ့လိုပဲ သူက ကြင်နာတတ်တယ်လား။
“အထွေးလေးက အစ်ကိုကြီးနဲ့ အစ်ကိုလေးကို သိပ်မုန်းတာ၊ မေမေ့ကိုလည်း မချစ်ဘူး”
စကားပြောနေရတာ ရင်ပေါ့သည်။ သူက သူမ၏ လက်ဖမိုးကို ပွတ်သတ်နေ၏။
နောက်တော့ ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး မောင်မောင်ဦးက သူမ၏အိပ်ခန်းထဲ ရောက်လာသည် မသိ။ သူ၏ နှုတ်ခမ်းမွှေး စူးစူးနှင့် ဆံပင်ကြမ်းကြမ်းတို့ သူမပါးပြင်နှင့် လည်ပင်းကိုလာ ပွတ်သတ်မိတော့မှ သူမ သတိရကာ စူးစူးဝါးဝါး အော်ဟစ်မိတော့သည်။
သူမ၏ အော်ဟစ်နေသော ပါးစပ်ကို မောင်မောင်ဦးက သူ၏လက်ကြမ်းကြီးများနှင့် ဆို့ပိတ်ထားစဉ် သူ၏ မျက်လုံးတို့က ချင်းချင်းနီနေကြ၏ ။
သူမ ရွံရှာ စက်ဆုပ်စွာ ဆက်ပြီး အော်ဟစ်ရုန်းကန်မိပြန်သည်။ နောက်တော့ သူမ၏ ပါးပြင်နှင့် မေးရိုးတို့ ပြင်းထန်စွာ နာကျင်ပြီး မျက်လုံးထဲ၌ မီးတောက်တစ်ခု ထတောက်အောင် သူက ရိုက်နှက်ပြီး အခန်းထဲက ထွက်သွားခဲ့သည်။
ထိုအချိန်မှာ အသံကုန်အော်ဟစ်နေမိပေမဲ့ သူမအသံတို့ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ကြသည်။ ထိုညက အဖျားကြီးပြီး ကယောင်ကတမ်းအော်ဟစ်တော့ ပိုးဟတ်ကြီးဟုသာ စူးစူးဝါးဝါး ရေရွတ်ခဲ့သည်ဟု သူမကို တာဝန်ယူပြုစုရသူ ဆေးဖောက ပြန်ပြောပြ၏။
ထို အဖြစ်အပျက်ကို ဘယ်သူမှ မသိလိုက်ကြ။ ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း သူမ မတိုင်တန်းရဲခဲ့။ သူက သတ်ပစ်မယ်ဟု ပြောသွားသည် ထင်၏။ အဲဒီနေ့၏ နောက်တစ်ညမှစကာ သူမ၏ အိပ်မက်ထဲမှာ ဧရာမပိုးဟပ်ကြီးတစ်ကောင် ပါလာတော့တာဖြစ်သည်။ ထို ပိုးဟပ်ကြီးက ဒရက်ကူလာလို သွေးစုပ်တတ်၏။ မောင်မောင်ဦးလို နှုတ်ခမ်းမွေး စူးစူးများလည်းရှိ၏။
ပြီးတော့ အိပ်မက်၏အဆုံးထိတိုင် မမက်ရဲဘဲ ပါးပြင်ပေါ် ထိ်ုပိုးဟတ်ကြီး ရောက်လာသည့်အခိုက်မှာပဲ အိပ်မက်က ရပ်တန့်သွားတော့သည်။ ထို့နောက်မှာတော့ ရေငတ်မောပန်းပြီး ဆီးသွားချင်ဖြစ်လာမည်။ ပြင်ပက တကယ့် ပိုးဟပ်တို့ကြောင့် ကြက်သီးဖြန်းဖြန်း ထမည်။ တခါတရံ ကြောက်လွန်းမက ကြောက်လာတော့ ဖေဖေ့ကို တမ်းတကာ ငိုမိမည်။ မေမေ့အပြောအရ နောက်နှစ်နှစ်ကြာမှ ပြန်လာမည့် အဖေကို စောင့်ချင်စိတ် တွေကြောင့် လက်ရှိဘ၀ ထဲမှ လည်း သူမ ထွက်မသွားရဲပါ ။ သူမ မလွတ်မြောက်နိုင်တော့ပြီလား။
ရေငတ်လာပြန်ပြီ။ ချွေးတို့စို့လာစဉ် ဆီးသွားချင်လာပြန်၏။ သူမ သောက်ရသော ဆေးတစ်မျိုးက ဆီးသွားစေသည်တဲ့။ လေးလံနေသော မျက်ခွံတို့ကို အားတင်းဖွင့်တော့ မီးအလင်းရောင်ကြောင့် မျက်လုံးတို့ ကျိန်းစပ်၏။ ခုန အိပ်မက်မှာတော့ ပိုးဟပ်က သူမ ခြေဖမိုးပေါ်ကိုသာ ပြေးလွှားတက်လာတာ။ မျက်နှာသို့တိုင် မရောက်လိုက်။ သူမက လန့်ဖျပ် ခါထုတ်ရင်း အမှတ်တမဲ့ ခုန်လိုက်တော့ သူ့ကို နင်းမိသွား၏။
ဗျစ်ကနဲ အသံမြည်ကာ ထိုပိုးဟပ်ကြီး၏ ခန္ဓာကိုယ် ပိပြားသွားပြီး လူတွေလိုပဲ သွေးတွေ၊ အူအခွေတွေ ထွက်လာသတဲ့။သူမက သဘောကျပြီး ဟက်ဟက်ပက်ပက်ရယ်မိစဉ် အိပ်မက်မှ နိုးလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ခုပင် စိတ်ထဲ၌ ပျော်နေသေးတော့။ သို့ပေမဲ့ အငုံ့လန့်စိတ်ကတော့ မကုန်ချင်။ ဘေးနံရံတွေမှာ လျှောက်ကြည့်တော့ ထူးဆန်းလှစွာပင် ပိုးဟပ်တစ်ကောင်မှ ရှိမနေ။ ကြမ်းပြင်မှာတော့ ဆေးဖော လုပ်ပေးထားသည့် ပိုးဟပ် တားဆေးဖြူဖြူတွေ ဖွေးနေ၏။ အတော်ကြာကြာ စောင့်ကြည့်သည့်တိုင် တစ်ကောင်တစ်လေမှ ထွက်မလာကြ။ ရေချိုးခန်းထဲမှာရော…။ အသက်ကိုပင် ဖွဖွရှူကာ နားစွင့်ပေမဲ့ ထိုအကောင်တို့၏ ခြေသံ၊ တောင်ပံသံ လုံးဝ မကြားရ ။ သူမထံ၌ စွန့်စားလိုစိတ်တွေ ရှိနေပါလား။
အိပ်မက်မှာ ပိုးဟပ်ကြီးကို နိုင်ခဲ့တာပဲလေ။ ကိုယ်တိုင်ပင် သတိမမူမိစွာ သူမခြေလှမ်း တို့က ရေချိုးခန်းသို့ ဦးတည်နေသည်။ တံခါးတွန်းဖွင့် စဉ်မှာတော့ လန့်နေသေး၏။ သူမ၏ ဖိနပ်သံကလွဲ၍ ဘာသံမှရှိမနေ။ ရေချိုးခန်းထဲ ခြေလှမ်းသုံးလှမ်း အ၀င်မှာပဲ ရုတ်တရက် သူမအောက်ကို ပိုးဟပ် တစ်ကောင် ပြေးဝင်လာသည်။ ရှောင်ပေမဲ့ မမီတော့။ ဗျိကနဲ မြည်သံနှင့်အတူ ဖြူပျစ်ပျစ် အရည်တွေ ထွက်ကာ တစ်ကောင် မရှုမလှ သေသွားသည်။
ကြည့်နေရင်းပင် ထိုဖြူပျစ်ပျစ်အရည်တွေက နီစွေးသောသွေးတွေ ဖြစ်သွားပြန်၏။ သူမ ကျေကျေနပ်နပ်ပြုံးကာ ခြေဆက်လှမ်း၏။ ရုတ်တရက် နောက်တစ်ကောင် အိမ်သာကြွေခွက်မှ ပြေးဆင်းကာ သူမခြေလှမ်းအောက်ကို ၀င်လာပြန်၏။ နောက်တစ်ကောင် သွေးချင်းချင်း နီပြန်ပြီ။ တဖြည်းဖြည်း သူမ ပျော်လာ၏။ ဒီည ဘာဖြစ်နေသလဲ၊ ပိုးဟပ်တွေက သူမကို အရှုံးပေးကာ သူတို့ကိုယ်တိုင် အနင်းသတ် ခံနေကြတာပဲ။ ပြီးတော့ ပျော်စရာလည်း ကောင်းလှသည်။
မေမေ ဆူဦးမလား။ အစ်ကိုတွေက ပိုဆိုးတာနော်။ ဒုက္ခပဲ…။ သေသွားခဲ့သော ပိုးဟပ်နှစ်ကောင်ကို လှည့်ကြည့် မိ၏။
မြတ်စွာဘုရား… ပိုးဟပ်တစ်ကောင်က အစ်ကိုကြီးလို မျက်လုံးပြူးနှင့်၊ နောက်ထပ် တစ်ကောင်က အစ်ကိုလေး လို ခြေတံလက်တံရှည်ရှည်။ ဒါ ….. အစ်ကိုကြီးနဲ့ အစ်ကိုလေးပဲ။ သူမ သဘောကျသွားသည်။ နောက်ထပ် ပိုးဟပ်တွေ ၀င်ပြေးလာကြပြန်သည်။ သူမ မရှောင်တော့။ သူမ၏ မျက်လုံးထဲမှာ ပိုးဟပ်တွေ အတုံးအရုံး။ မောင်မောင်ဦး ၊ ကိုကိုကျော်နှင့် သူ၏ မိန်းမငယ်တို့ အတုံးအရုံး။
သူမနိုင်ပြီ ။ ၀မ်းသာအားရ အော်ဟစ်မိတော့သည်။
ကြည့်စမ်း...၊ ကြမ်းပြင်တစ်ခုလုံး သူမမုန်းသူတို့၏ ရုပ်အလောင်များဖွေးလို့၊ ၀မ်းမြောက် ကျေနပ်စွာ သူမ အသံကုန်ခြစ် ဟစ်အော်မိတော့သည်။
သူမ၏ အော်ဟစ်သံအဆုံးမှာ တံခါးဖွင့်သံတွေ ဆက်တိုက်ကြားလိုက်ရသည်။ မေမေ … အစ်ကိုကြီး၊ အစ်ကိုလေး၊ ဆေးဖော နဲ့ မာလီကြီး။ လူတွေ အများကြီးပါလား။ လူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ပိုးဟပ်တွေပါ။ ကြည့်ပါလား…. ညည်းတွားသံတွေပေးလို့ ပြေးဝင်လာကြတာ ။ သူမ ကြိုးစားပမ်းစား နင်းသတ်နေမိပြန်သည်။
အထွေးလေး သိပ်အခြေအနေဆိုးနေပြီတဲ့…။ သူမပါးစပ်ကို အစ်ကိုကြီးက အတင်းလာပိတ်သည်။ အိုး…. ကြမ်းတမ်းလိုက်တဲ့ အတွေ့။ ပိုးဟပ်အစစ်ပဲ။ မကောင်းဆိုးဝါးနံ့ကလည်း ရသေးရဲ့…။ အစ်ကိုလေးက အတင်း ဖမ်းချုပ်ပြန်၏။ ဆေးရုံပို့မယ်တဲ့။ ချက်ချင်းပဲ ခေါင်းထဲမှာ မူးဝေလာသည်။
သူမ နောက်ဆုံး မြင်လိုက်ရသည်က သူမကိုယ်တိုင် ဖိနင်းသတ်ခဲ့သော အလောင်းကောင်များမှ အသက်ပြန် ၀င်ကာ ထိုပိုးဟပ်များက သူမကို တရွေ့ရွေ့ ဆွဲခေါ်သယ်ဆောင် သွားနေတာပဲဖြစ်သည်။ ထို့နောက်မှာတော့ အကြောက်ကြီး ကြောက်ကာ သူမ အရာရာကို မေ့သွားတော့သည်။
၁၉၉၀၊ ဇန်န၀ါရီ၊ မဟေသီမဂ္ဂဇင်း။
at March 20, 20086comments:
တကယ်တော့ ကိုကိုကျော်ကို စတွေ့ရသည်ကပင် ပိုးဟပ်များနှင့် ယှဉ်တွဲကာ နေခဲ့၏။
ထိုနေ့က သူမ၏ အိပ်ခန်းမှာ ပိုးဟပ်ပျံ တစ်ကောင် ရှိနေခဲ့၏။ ထို ပိုးဟပ်ပျံက တ၀ှီးဝှီးနှင့် ဟိုမှသည် ပြေးလိုက်၊ နားလိုက်၊ အိပ်ခန်းတံခါးကလည်း ပိတ်ထားသည်မို့ ထိုသတ္တ၀ါ အတွက် ထွက်ပေါက် ပိတ်နေပြန်သည်။
သူမက စာကြည့်စားပွဲမှာ အလုပ်ရှုပ်နေစဉ်ဖြစ်ရာ ရုတ်တရက် ဘယ်ကထွက်လာမှန်းမသိသည့် ထိုအကောင်ကို ကာကွယ်ဖို့ အချိန်မမီဖြစ်သွား၏။ ရုတ်တရက် သူမ ပခုံးစွန်ဖျားမှာ သူလာကပ်တော့မှ ကြောက်လန့်တကြား ထပြေးမိသည်။
ပြေးတော့လည်း သူမ အိပ်ယာနဲ့ ကပ်နေသော ခေါင်းရင်းက ပြတင်းပေါက်ဘေးကို ကပ်မိသည်။ ဟုတ်သားပေါ့။ ပြတင်းပေါက်ကို ဖွင့်လိုက်နိုင်လျှင် ထိုအကောင် အလွယ်တကူ ထွက်သွားနိုင်ဦးမည်။ ပြတင်းကို ဖျတ်ခနဲ လှမ်းဖွင့်ကာ လက်တစ်ကမ်းစာသာ ဝေးသော ခြင်ထောင်ကို မ တင်ကာ သူမ အိပ်ယာထဲ အမြန်ဆုံး ၀င်နိုင်ဖို့ သာ ကြိုးစားရမည်။ ၀ှီးခနဲအသံနှင့်အတူ ပိုးဟပ်က သူမ ဖွင့်လိုက်သော ပြတင်းပေါက်တံခါးရွက်မှာ သွားကပ် သည်။
တချိန်တည်းလိုပဲ သူမ အိပ်ယာထဲ အရောက် ၀င်လိုက်နိုင်သည်။ ပြီးတော့ သူမ၏ ဓလေ့အတိုင်း ခြင်ထောင် ကြောင့် လုံခြုံသွားမှုကို အားကိုးကာ သူမ ရွံ့မုန်းလှသော ထို အကောင်ကို လိုက်ကြည့်မိသည်။
ကြည့်ပါလား...၊ နှာမောင်းတံ တစ်စုံက လှုပ်ငြိမ့် လှုပ်ငြိမ့်နှင့် ခြေချောင်းတွေကလည်း အငြိမ်မနေ၊ တရွရွနှင့်။ အဲဒီ သူ့ခန္ဓာကိုယ်က အခွံမာ တောင်ပံကရော ဘယ်လောက် ခြောက်သယောင်းယောင်း နိုင်သလဲ။
အသည်းယားစရာ။ အပြင်လေထုထဲကို ပျံပါတော့လား။ နင့်အတွက် ပိုတောင် လွပ်လပ်ဦးမှာ။ သစ်ရွက်တွေ၊ ညပိုးဖလံတွေ ကိုတောင် စားရဦးမှာ။ ငါ့အခန်းထဲမှာဆို တော်ကြာနေရင် ဘွားလေးက Shell-tox တွေ၊ လေးညှင်းပွင့်တွေ ကြဲပက်ပစ်လိုက်မှာ။ နင့်ကို အန္တရာယ်တောင် ပေးနိုင်သေး။ ပိုးဟပ်ကတော့ ငြိမ်နေဆဲပင်။
သူမ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နှင့် ပြတင်းပေါက် အပြင်ဘက်ကို လှမ်းကြည့်နေမိသည်။ အဲသည် အချိန်မှာပဲပေါ့။ ကိုကိုကျော်က ပိုးဟပ်ပျံ ဘယ်နေရာကို ရောက်သွားသလဲ ဆိုတာကို သူမ မေ့သွားအောင် တတ်နိုင်ခဲ့တာ။
ခြင်ထောင်ထဲမှတဆင့် လှမ်းကြည့်လျှင် မြင်နိုင်သော တဘက်ခြံကို သူမ ငေးနေမိဆဲ။ သူမ၏ မျက်လုံးတွေကို အောက်ကို ကိုကိုကျော် ၀င်လာ ခဲ့တာပေါ့။
တဘက်ခြံမှ နှစ်ထပ်တိုက်၏ သူမ အိပ်ခန်း ပြတင်းထက် အနည်းငယ် နိမ့်သော ပြတင်းပေါက် တစ်ဖက်မှာ သူမကို လွှမ်းမိုးနိုင်သည့် လူငယ်တစ်ဦး ရှိနေသည်ဟု သူမ တခါမှ မသိဖူးခဲ့။ (ထိုလူငယ်ကို တစ်ယောက်က လှမ်းခေါ်သည်ကို သူမ ကြားရ၍ သူ့ အမည် ကိုကိုကျော်ဟု သိခဲ့ရသည်။)
ထိုစဉ်က နွေအပူကြောင့်ပဲလား မသိ။ ကိုကိုကျော်က အခန်းပြတင်း၏ ဇာခန်းဆီးကို ထောင့်ဘက်ကပ်ကာ စည်းနှောင်ထားခဲ့သည်။ ပြီးတော့ သူသည် စာကြည့် စားပွဲ၌ ထိုင်နေပုံ ရသည်။ မီးရောင်ကို မျက်နှာချင်းဆိုင် ထားရသည်မို့ သူ့မျက်နှာကို ထင်ထင်ရှားရှား လင်းလင်းပပ မြင်နေရသည်။ တခြံနှင့်တခြံ မဝေးလှသည်မို့ မျက်နှာရိပ်ကိုပင် မြင်သာ၏။ သူက စိတ်ပါဝင်စားစွာ စာဖတ်နေတာဖြစ်သည်။
သူ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းမှာ စွပ်ကျယ်ကလေးမျှပင် ဝတ်မထားခဲ့။ ကျစ်လျစ်သန်မာသော ရင်အုပ်နှင့် ပခုံးသား၊ လက်မောင်းကြွက်သားတို့မှာ မီးရောင်တွင် စိုလက်နေကြ၏။ စာဖတ်ရင်း တချက်တချက် မျက်နှာကိုမော့ကာ မျက်လုံးစုံမှိတ်ရင်း ငြိမ်သွားတတ်သေးသည်။
ထိုအခါတွင် သူမ အသက်ရှူပင် မှားမိသည်။ စေ့ယှက်နေကြသော မျက်တောင်ထူထူများ၏ အောက်က မြင်လွှာအာရုံဆီမှာ မိန်းမချောကလေး တယောက်ယောက်များ ရှိနေမှာလားဟင်။ သူမ ငိုမဲ့မဲ့ဖြစ်လာမိ သေးသည်။
သူမသည် အကိုနှစ်ယောက်နှင့် အမေတို့၏ တင်းကျပ်သောအုပ်ချုပ်မှုအောက်၌ နေရသူပီပီ၊ အလိုလိုက်သော ဖခင်နှင့် ခွဲခွာနေရသူပီပီ၊ ပြီးတော့ မိန်းမငယ်ကလေးပီပီ၊ စိတ်ငယ်လွန်းလှသူဖြစ်၏။ မယှဉ်ပြိုင်မီကပင် ဆုံးရှုံးမည်ဟု ထင်တတ်သူလည်းဖြစ်၏။
ပြီးတော့ လူငယ်တယောက်ကို ခုလို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကြည့်ခွင့်မရဖူးခဲ့သူ၊ ကံဆိုးချင်တော့ ထိုလူငယ် ကလည်း စွဲမက်ဖွယ်ချောမောသူ ဖြစ်နေ၏။ ထိုညမှစကာ... ညပေါင်းများ စာဖတ်နေသော၊ လမ်းလျှောက် နေသော၊ တွေငေးနေသော နွားနို့(ဖြစ်ဟန်တူသော) သောက်နေသော၊ ကံသိပ်ကောင်းလျှင် သူမ နှစ်သက် လှသည့်သီချင်းတို့ကို အဆိုမပါပဲ ဂစ်တာဖြင့် တီးရင်း လေချွန်နေတတ်သော ကိုကိုကျော်ကို ညစဉ် ခိုးစောင့် ကြည့်ခြင်းက သူမ၏အနှစ်သက်ဆုံး တာဝန်တခုဖြစ်လာခဲ့သည်။
ညခုနစ်နာရီတွင် ကိုကိုကျော် စာကြည့်စားပွဲထိုင်ကာ ညဆယ်နာရီတွင် ပြတင်းပေါက်ကို ပိတ်၏။
ညတိုင်း ခြင်ထောင်အတွင်း အိပ်ရာခေါင်းရင်းဘက်မှာ ထိုင်ကာ၊ ခေါင်းအုံးပေါ် စာအုပ်တအုပ်တင်ပြီး ဖတ်နေ ဟန်ဖြင့် ငြိမ်နေတတ်သော အခါတိုင်းလို ပိုးဟပ်ကြောင့် ပြေးလွှားနေသံ၊ အော်ငေါက်နေသံ၊ ညည်းညူသံတွေ မပေးတော့သော၊ သူမကို အမေတို့ကလည်း စိတ်ချလက်ချ လွှတ်ထားခဲ့ရာ သူမသည် ကိုကိုကျော့်ထံ လွတ်လပ်လွင့်မျောတော့သည်။
ကိုကိုကျော့်ကို မျက်လုံးမလွှဲတမ်းကြည့်ကာ အတွေးမှတဆင့် ကိုကိုကျော့်နံဘေးထိတိုင် သွားထိုင်နိုင်၏။ အမယ်...... သူ၏ ဖိပိတ်ထားသော မျက်လွှာအောက်ကိုပင် ဝင်ရောက် နိုင်သေး၏။ ထိုအခါမျိုး၌ ကိုကိုကျော့် မျက်လုံးအိမ်ထဲမှာ ဘယ်လိုိကောင်မလေးမှ ရှိမနေ။ သူမတဦးတည်းသာ ဗိုလ်။ အကိုတွေနှင့် အမေက လျှပ်တပြက် ဝင်လာစစ်ဆေးရင်လည်း စာငုံ့ဖတ်နေရုံပဲ။ သို့ပေမဲ့ သူတို့က မရိပ်မိပါ။ သူမကို သတ္တိကောင်း လာပြီ ဟုပင် ချီးကျူး ကြသေး။
အချိန်တွေအများကြီး ကိုကိုကျော့်ထံပါး သူမစိတ်တို့ ယဉ်ပါးလွင့်မျောခဲ့ပါလျက်နှင့် ကိုကိုကျော်က သူမကို နည်းနည်းမျှ ငဲ့မကြည့်ခဲ့။
ဒါနဲ့ စိတ်ပညာရှင်တချို့ကပြောတော့ စိတ်၏အားစိုက်မှုဖြင့် လူတဦးနဲ့ တဦး ဆက်သွယ်နိုင်သည် ဆို။ သို့ပေမဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်ထိ ကိုကိုကျော်က သူမကို တချက်ကလေးမျှပင် သတိ မပြုခဲ့။
သူမကတော့ အကိုတွေပြောသလို ခပ်ပေါက်ပေါက်ကောင်မလေးမို့ ထင်ပါရဲ့။ ဒါမှမဟုတ် မေမေ တခါက သူမ ကွယ်ရာမှာပြောသလို စိတ်သိပ်မကောင်းဘူးဆိုတာကြောင့် ဖြစ်မည် ထင်၏။
သူမ၏စိတ်စွမ်းအင်က ညံ့ဖျင်းနေတာ။ ဒါကြောင့် ကိုကိုကျော်က သူမ၏စိတ်ဆက်သွယ်မှုကို မသိနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ရမည်။ ကိုကိုကျော့်ကို စ တွေ့စက နံနက်ခင်းတွေမှာလည်း ကိုကိုကျော်ကို ရှာမိသည်။ သို့ပေမဲ့ ကိုကိုကျော် တို့ ခြံထဲမှ ပိတ်ထားသောတံခါးရွက်များနှင့် တိတ်ဆိတ်နေသော သစ်ပင် ပန်းပင်များကသာ သူမကို ခပ်ငူငူ ကြည့်နေကြသည်ချည်းသာ။
သူမ အိပ်ရာထ နောက်ကျလို့လားဟု တွေးပြီး စောစောထပေမဲ့လည်း ကိုကိုကျော်၏ အရိပ်မျှကိုပင် မမြင်ရ။ သို့နှင့်ပင် သူမ ယခင်အချိန်များစွာမှာ ကြောက်ရွံ့ခဲ့ဖူးသော ညများကိုသာ တမက်တမော စောင့်မျှော် တတ်လာခဲ့တာ ဖြစ်သည်။
ထိုညများမှာတော့ သူမ၏ စိတ်အာရုံအလုံးစုံက ကိုကိုကျော့်ထံမှာသာ တည်နေတော့၏။ ဒါနဲ့တောင် ကိုကိုကျော်က သူမကို ရှာမတွေ့ခဲ့။ တခါတခါများ စိတ်တွင်းမှ ‘ကိုကိုကျော်ရေ.....’ ဟု အသံကုန် အော်ဟစ် ခေါ်မိသေးတာ အကြိမ်ပေါင်း များစွာ။
တကယ်ဆို… တယ်လီပသီဆို ရှိတယ်ဆို။
သူ့ထုံးစံအတိုင်း တကြိမ်မှာ ကိုကိုကျော်က မျက်နှာကိုမော့ကာ မျက်လုံးစုံမှိတ် ငြိမ်သက် နေခိုက် သူမကလည်း ငေးမောစူးစိုက်ငြိမ်သက်နေခိုက် ရုတ်တရက် ကိုကိုကျော့်မျက်လုံးတွေ ပွင့်လာ၏။ အိုးး.. ရင်တွေ တဆတ်ဆတ် တုန်ကာ သူမ သွေးရူးသွေးတန်းနိုင်စွာ ကုတင်ပေါ် ရုတ်တရက် မှောက်ချ ပုန်းကွယ် လိုက်မိသည်။
သူမ အသက်ရှူနှုန်းတွေ တအားမြန်လာပြီး ခေါင်းပင်မူးလာသည်။ နားထဲမှာလည်း တဝီဝီနှင့် ပိုးဟပ်တကောင် ပျံသန်းလေသလား။
ခဏကြာတော့ သူမကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သတိရကာ စိတ်တိုတော့သည်။ ကြည့်စမ်း သူရဲဘောကြောင်လိုက်တဲ့ မိန်းမ။ ဒါနဲ့များ ကိုကိုကျော်က အသိအမှတ်ပြုတာခံချင်သေး။ ညတိုင်း မီးဝါဝါတွေ လင်းလာချိန်မှ ဘယ်သူမှ မသိအောင် ပြတင်းပေါက်တွေက တဆင့် တယောက်မျက်နှာကိုတယောက် ငေးမောစိတ်ဝင်စားနေချင်သတဲ့။ ‘ကိုကိုကျော့်အနားမှာ အထွေးလေး သိပ်နေချင်တာပဲ’ လို့လည်း ပြောမတဲ့။ စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့တာတွေလေ။
တကယ့်လက်တွေ့ကျတော့ ကိုကိုကျော် မြင်မှာကိုတောင် ကြောက်လန့်ပုန်းရှောင်တဲ့ မိန်းကလေးပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲနော်။ ကိုကိုကျော် မျက်လုံးတွေက ပွင့်လာချိန် တကယ်ပဲ သူမ တုန်လှုပ်ရတာပဲ။ ဘယ်လို ပြင်ဆင်ထားလို့မှ မရတာပဲ။
ပြီးတော့ ခေါင်းအုံးတွင်မျက်နှာအပ်ပြီး ငြိမ်သက်နေချိန်မှာ သူမခန္ဓာကိုယ်တခုလုံး သွက်သွက်ခါအောင် တုန်ယင်နေတော့သည်။
အဲသည်ညရဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူမကိုယ်တိုင်ကြောက်လန့်ခဲ့သော အမှောင်ကို ကိုယ်တိုင်ပဲ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုတတ်ခဲ့သည်။
ကိုကိုကျော် သူမကို မမြင်ဖို့၊ အမေနှင့် အကိုတွေရန်ကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်စွာ စောစောအိပ်သည်ဟု အကြောင်းပြပြီး သူမ၏ ညဦးပိုင်းများကို မီးမှောင်ချထားဖြစ်ခဲ့၏။ အမှောင်ထဲမှ နေ၍ အလင်းဝါအောက်မှ ကိုကိုကျော့်ကို ကြည့်နေရသည်က ပို၍ပင် ဆွတ်ပျံ့ ကြည်နူးဖွယ် ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ သူမ၏စိတ်ကို ပြီးပြည့်စုံသော လုံခြုံမှုလည်း ရစေ၏။ အမှောင်ထဲ၌ ရဲဝံ့နေသော သူမသည် တခါတရံ မျက်မှောင်ကုတ်လိုက်၊ တခါတရံ ပြုံးလိုက် လုပ်နေတတ်သော ကိုကိုကျော်နှင့် စကားတွေလည်း ဆိုနိုင်သည်။ ထိုအချိန်မှာတော့ အမှာင်ကိုပင် သူမ တွယ်တာလှသည်။
သုံးနှစ်သမီးမျှသာ အရွယ်ကတည်းက အိပ်ခန်းကျယ်ကြီးထဲမှာ တယောက်တည်း ခွဲအိပ်ခဲ့ရသော သူမက အိပ်ရာခွဲအိပ်စ ရက်မှာသိပ်ကြောက်လန့်နေခဲ့သည်။
ထိုအချိန်တုန်းကလည်း ဖေဖေက နယ်မှာအလုပ်လုပ်နေတာပဲဖြစ်သည်။ သူမငိုနေသည့် ကြားမှာ အကိုတွေက အခန်းတံခါးပိတ်သော့ချကာ မီးမှောင်ထဲမှာ သူမကိုပစ်ထားခဲ့သည်။
သူမကတော့ အိပ်ခန်းနှင့်ကပ်လျက် ထမင်းစားခန်းထဲမှာ မေမေတို့၏ဖဲဝိုင်းသံကြားနေရသည့်အထဲမှပင် အမှောင်ထဲမှာ ချွေးဒီးဒီးကျ ကြောက်လန့်နေခဲ့သည်။ ကြောက်လန့်လွန်းလာတော့ အိပ်ရာမှအသာထကာ အိပ်ခန်းဝင်ပေါက် တံခါးနား ကပ်သွား မိသည်။
ဆောင်းတွင်းအေးအေးကြောင့် သူမ အဝတ်ဖိနပ်ကလေး စီးထားခဲ့၏။ တံခါးရွက်တွေကို မှီရင်း သူမ အကြာကြီးပဲ ငိုနေခဲ့ရသည်။ နောက်မှ မောပန်းနွမ်းနယ်ကာ အိပ်ချင်လာ၍ အိပ်ရာထဲ ပြန်ဝင်ရ၏။ ပြီးတော့ လည်း အိပ်ပျော်သွားရတော့တာပဲ။
သို့ပေမဲ့ နံနက်အိပ်ခန်းတံခါးဖွင့်တော့ မေမေ့ဆူပူသံကို ရင်ဆိုင်ခံရသည်။ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ပိုးဟပ်သုံးကောင် ပိပြားသေနေကြသည်တဲ့။ ကြမ်းခင်းညစ်ပတ်သတဲ့။ ကလေးဖြစ်ပြီး ရက်စက်သတဲ့။ ဖအေ၏သမီးတဲ့။ မေမေ့မျက်နှာက မလိုအပ်ဘဲ တင်းမာလွန်းနေခဲ့၏။ နောက်တခါ ပိုးဟပ်သတ်ရင် နင့်ကို ရိုက်မယ်တဲ့၊ မေမေက နာနာကျည်းကျည်းဟန်ဖြင့် ပြောပြန်သည်။
ဘွားလေးက မေမေ့ကို ရင်ဆိုင်ကာ… ‘နေပါစေ မီမီ၊ ကလေးက ကြောက်လို့ သတ်မိတာဖြစ်မှာပေါ့။ ငါ အထွေးလေးနဲ့ တူတူအိပ်မယ်’ ဟု ၀င်ပြောတော့မှ သူမလည်း ဝမ်းသာသွား၍ မဆုံးခင် မေမေက ဘွားလေး၏အဆိုကို ကန့်ကွက်ခဲ့၏။
သေချာသည်ကတော့ ထိုအချိန်မှာတုန်းက သူမ ပိုးဟပ်ကို မကြောက်တတ်သေးတာပဲ ဖြစ်သည်။ နောင်မှ တယောက်တည်း ညတွေမှာ ထိုအကောင်တွေကို မနင်းမိဖို့ ရှောင်ရင်းပဲ တဖြည်းဖြည်း များပြားလာသော ထိုအကောင်တွေကို ရွံမုန်းလာတာဖြစ်သည်။
တကယ်လည်း ညမှောင်မှောင် အိပ်ခန်းကျယ်ကြီးအတွင်း စိတ်အေးချမ်းလွတ်ငြိမ်းရာရှာရင်း လမ်းလျှောက် သည့်အခါ… ပြတင်းပေါက်၌ ငေးမောနေသည့်အခါ… မေမေတို့ဖဲဝိုင်းမှ စကားသံတို့ကို သွားကပ်ပြီး နားထောင် သည့်အခါတွေမှာ ရှောင်မရနိုင်သောကြောင့် ပိုးဟပ်တွေကို နင်းမိမြဲ ဖြစ်၏။
မေမေက ပိုးဟပ်သေတွေကို တွေ့တိုင်း ဆံပင်ဆွဲ၊ နားရွက်လိမ်။ အကိုတွေက ရေချိုးခန်းမှာ မီးမှောင်ချ သော့ပိတ် ဒဏ်ပေး။ သူမဘဝကို မိသားစုနှင့်အတူ ညအမှောင်နှင့် ပိုးဟပ်ကလည်း ဒုက္ခပေး၏။ ဒါကို နားလည်တတ်လာသော အရွယ်ရောက်လာချိန်မှာတော့ သူမ ပိုးဟပ်တွေကို သိပ်ကြောက်နေခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ဖေဖေက သူမကို သိပ်ချစ်၏။ သူမသည် မွေးကတည်းကပင် အနေအေးသူဖြစ်သည်တဲ့။ အိပ်ရာက နိုး၍မှ မငိုတတ်။ သေးစို၍လည်း မငိုတတ်၊ နို့ဆာ၍လည်း မငိုတတ်ဘူးတဲ့။
အကိုနှစ်ယောက်နှုင့် ရှစ်နှစ်ခန့်ကွာပြီးမှ သူမကို မွေးသည့်အပြင် အကိုတွေက မေ့မေ့ အလိုလိုက်မှုကြောင့် ဆိုးသွမ်းလေရာ၊ ဖေဖေက သူမကို သိပ်ချစ်သည်တဲ့။ ဘွားလေးက ပြောပြ တတ်သည်။
အထွေးလေး ဖေဖေက သားဦးကိုတောင် မိန်းကလေးလိုချင်ခဲ့တာ။ ဒါကြောင့် သမီးကို တအားချစ်တာပေါ့။ နာမည်တောင် ‘အထွေးလေး’လို့ပေးတာ ကြည့်ပါလားတဲ့။
မိသားစုနှင့်အဝေးမှာ သားနှစ်ယောက်က လိမ္မာအေးချမ်းမှုမရှိသောအခါ ဖေဖေက ခေတ္တ ခဏ အိမ်ပြန်ရောက် ရသည့်တိုင် အစဉ်အမြဲ ဆူပူဆုံးမနေရတော့သည်။ ဆိုးသွမ်းလွန်းသော အကိုနှစ်ယောက်ကလည်း ရိုက်မှ ရတော့သည်တဲ့။ ထိုအခါ ဝင်တားတတ်သော မေမေနှင့် ရန်ဖြစ်ပြီး လူဖြောင့်စိတ်တိုဖေဖေက မေမေ့ကိုပါ ရိုက်မိတော့တာတဲ့။
သေချာသည်ကတော့ ဖေဖေ့စေတနာကို နားမလည်သော မေမေနှင့်အကိုနှစ်ယောက်က ဖေဖေ့ကို ရွံ့ကြောက်ကြကာ ဖေဖေချစ်တဲ့ အထွေးလေးကိုသာမဲပြီး အနိုင်ကျင့်ကြတော့တာ ဖြစ်သည်။
ဒါကိုပင် သူတို့က ကျေနပ်နှစ်သက် မြိန်ယှက်နေကြတာတဲ့။ မေမေ့အမေဖြစ်သော်လည်း အမှန်ကို မြင်တတ် သော ဘွားလေးက ပြန်ပြောပြ၍သာ ထိုအကြောင်းအရာတွေကို သူမ သိခွင့်ရခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မေမေ့အပြစ်ရှာမှုများသည် ဘာမှမဟုတ်သော အသေးအဖွဲကလေးများသာဖြစ်သည့် သူမ ထမင်းစားစဉ် ထမင်းလုံးဖိတ်မိခြင်း၊ ခြင်ထောင်ထဲခြင်ဝင်နေခြင်း၊ မှတ်ဉာဏ်ချို့တဲ့ကြောင်း ဆရာဝန်မှတ်ချက်ရှိလျက်နှင့် သူမအမှတ်နည်းရခြင်းတို့က အစ ပါတတ်၏။
အကိုတွေကျတော့ ပိုးဟပ်၊ အိမ်မြှောင်၊ ကြွက်၊ ဖားပျံ၊ စသည်တို့ကို သူမအလစ်မှာ ခြင်ထောင်ထဲ ထည့်ထားပြီး သူမလန့်လျှင်တော့ အပြစ်လုပ်ကာ နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ဆုံးမ၏။ သူမကတော့ အဖေနှင့် အစ်ကိုတွေကို တုံ့ပြန်မရတိုင်း ထိုသို့အတူ မတုံ့ပြန်ရဲသည့်၊ သူမ အမုန်းတီးဆုံးဖြစ်သော ပိုးဟပ်ကိုသာ ကြောက်သထက် ကြောက်ပြီး မုန်းသထက် မုန်းလာတော့သည်။
သို့ပေမဲ့ ထိုစဉ်က အမုန်းကတော့ အိပ်မက်ထဲထိ မကျူးကျော်နိုင်ခဲ့။ မခြောက်လှန့်နိုင်ခဲ့။ မောင်မောင်ဦးနှင့် ကြုံခဲ့ရပြီးမှ ပိုးဟပ်ကိုကြောက်သော အကြောက်တရားမျိုးက အိပ်မက်ထဲထိတိုင် စွဲထင်ခြောက်လှန့်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အချိန်အတော်ကြာကြာ သူမ၏အကြောက်တရားများအား မေ့နေနိုင်ခဲ့သော သူမကို လှုပ်နှိုး သတိပေးခဲ့သည် ကတော့ ကိုကိုကျော်ပဲ ဖြစ်ခဲ့သည်။ အတိအကျပြောရလျှင်တော့ သူမထက် အဆများစွာလှပသော အမျိုးသမီး ငယ်တစ်ဦးလည်း ပါဝင်ရလိမ့်မည်။
(ဇာတ်သိမ်းပိုင်းရှိသေးသည် :P )